အမည်မသိစာအုပ်: ကမ်းခြေ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
အပြောကျယ်လှတဲ့ ရေပြင်ပြာကြီးကို ငေးမောရင်း၊ သဲပြင် ဖြူလွှလွှလေးပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အရသာဟာ အင်မတန်မှ ခံစားလို့ ကောင်းတာပဲဗျ။ ၀ုန်းခနဲဆိုပြီး ကမ်းစပ်ကို ပြေးဝင်လာတဲ့ လှိုင်းလုံးကြီးတွေဟာ ကိုယ့်ဆီကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ပြောလျော့ပြီး လှိုင်းခေါင်းဖြူလေးတွေအနေနဲ့ ခြေထောက်ကို တိုက်ပွတ်သွားတဲ့ ဖီလင်ဟာ ဒီလိုမျိုး ကမ်းခြေရောက်မှပဲ ခံစားနိုင်တာကိုး။ လတ်ဆတ် ရှင်းသန့်နေတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ လေပြည်ကလည်း ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီလက်တို ပွပွကို တဖတ်ဖတ်နဲ့ မြည်အောင် ရံဖန်ရံခါ ပွတ်တိုက်သွားနေသေးရဲ့  ...။
“ကိုကြီး .. ရေထဲ ဆင်းလေ”
“အာ .. မဆင်းတော့ဘူး ... ကင်မရာ ရေစိုသွားလိမ့်မယ် .. သဲတို့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့်လူလဲ မရှိ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်”
“ဆင်းပါ .. ကိုကြီးကလဲ .. ဆင်းပါ .. ဆင်း ဆင်း”
တကယ့်ဟာမလေးတွေ .. ရေထဲဆင်းဖို့ ၀ါသနာမပါတဲ့ ကျနော့်ကို အတင်းဝိုင်းဆွဲပြီး ရေထဲရောက်အောင် တွန်းချနေတာ။ တခြားသူတွေ ဟုတ်ရိုးလား။ သဲရဲ့ ညီမ ငယ်ငယ်နဲ့၊ သူ့သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးဖြစ်တဲ့ သိင်္ဂီဆိုတဲ့တစ်ယောက်။ ပျိုမျစ်နုနယ်တဲ့ အရွယ်ပိုင်ရှင် ကောင်မလေးနှစ်ယောက်။ သဲက ဒါကိုကြည့်ပြီး တခိခိနဲ့ ရယ်ပြီး ကျနော့်လက်ထဲက ကင်မရာကို ယူသွားပြီး ဓါတ်ပုံတောင် ရိုက်နေသေး။
“ဖေ့ဘုတ်ပေါ် တင်ရမယ် .. ငါ့ကိုကြီးကို ကောင်မလေးတွေ ၀ိုင်းဆွဲနေကြတယ် .. ကူညီကြပါဦး ဆိုပြီး .. ခိ ခိ”
“မမနော် ... ငယ်ငယ်က ပြသနာမရှိဘူး .. သိင်္ဂီကောင်လေးတွေ့သွားမှ ကွိုင်တက်နေမယ်”
“အို .. ရတယ် .. သိင်္ဂီတို့က ပိုင်ပြီးသား .. မသဲ .. ဓါတ်ပုံပဲ ရိုက်မနေနဲ့ ... သူ့ဟာကြီးကိုလာဆွဲဦး”
“ဟဲ့ .. ဘယ်ဟာကြီးလဲ”
တကယ်ပါဗျာ .. ခင်ဗျားတို့တော့ မသိဘူး။ ကျနော်တော့ မိန်းကလေး သုံးလေးယောက်ရဲ့ ကြားမှာ နေရတာ တကယ်ကို နားပူတာပဲ။ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် တိုင်ပင်ထားသလို အဆက်မပြတ်ပြောနေတဲ့ သူတို့စကားတွေထဲ ကိုယ့်စကားရောက်ဖို့ဆိုတာ တကယ်ကို မလွယ်တဲ့ ကိစ္စဗျ။ တော်တော်ကြီးကို ငြင်းဆန်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေချင်လို့ပါ .. တခြားမသွားဘူး .. ဒီနေရာမှာပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပြီး နေပါ့မယ်လို့ တော်တော်ပြောယူလိုက်ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ရေကူးဝတ်စုံတွေ ဘာတွေနဲ့ အကျအန ပြင်ဆင်ထားတဲ့ သူတို့ပဲ ကျနော့်ကို လက်လျှော့သွားတယ် ထင်ပါရဲ့ ။ ထပ်မခေါ်တော့ဘဲ သူတို့ဖာသာသူတို့ ရေထဲ ဆင်းဖို့ ပြင်ကြတော့တယ်။ အချိန်ကလည်း မနည်းတော့ဘူးလေ။ ခနနေရင်ပဲ နေ့မွန်းတည့်ချိန် ရောက်တော့မှာ။
ငှားထားတဲ့ ဗောကွင်းကို ဆွဲပြီး သဲတို့ ရေထဲဆင်းဖို့ ပြင်နေခိုက်မှာ ကျနော့် နောက်နားကနေ စကားပြောသံတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရတယ်
“အမ .. အဆင်ပြေရင် ညီမကို ဓါတ်ပုံတစ်ပုံလောက် ရိုက်ပေးပါလား .. စတစ်နဲ့က ရိုက်ရတာ မကောင်းလို့”
ကျနော်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ရပ်နေတဲ့ သက်ဆိုင်သူ ထံကနေ .. ရတယ် ညီမ .. ပေးပေး ဆိုတဲ့ တုံ့ပြန်သံ ထွက်လာပေမယ့်၊ ကျနော်ကတော့ တကိုယ်လုံး အကြောအချင်တွေ တောင့်တင်းသွားသလို တောင့်တောင့်ကြီး ရပ်နေမိတယ်။ ဒီအသံချိုချိုလေးရဲ့ ပိုင်ရှင်ဆိုတာ ကျနော် မသိတာမှ မဟုတ်တာ။ ကျနော့် နောက်ကို ရောက်နေတာ နန်းယွန်းဝေရယ်လေ ...
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ပြကြတဲ့အတိုင်း ကျနော့်ကိုယ်ကို စလိုးမိုးရှင်းအနေအထားနဲ့ နောက်ဘက်ကို လှည့်လိုက်တယ်။ ကမ်းခြေဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းအတိုင်း အလန်းစား ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ယွန်းကို ဦးထုပ်အ၀ိုင်းအပြားကြီး ဆောင်းပြီး၊ ခါးကျင်ကျင်လေးနေရာမှာ ပုဝါအဖြူရောင်လေး တစ်ခုချည်လျက်သားနဲ့ နောက်နားမှာ မခို့တယို့ ရပ်နေတာ တွေ့တယ်။ အမယ် .. မျက်နှာက ကျနော့်ကို ကြည့်မနေဘူးဗျ။ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ မသိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ကျနော့်ဘေးကနေ ကျော်ဖြတ်သွားတဲ့ သဲကို သူ့ဖုန်း ထိုးပေးရင်း ကျေးဇူးတင်တဲ့ဟန်နဲ့ ပြုံးပြနေတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာပါတဲ့သူတွေ အမြဲဆောင်ထားလေ့ရှိတဲ့ ဆယ်ဖီရိုက်ရင်သုံးတဲ့ စတစ်လေး ရှိနေလေရဲ့  …။
“ဘယ်လို ရိုက်ချင်တာလဲ .. ညီမလေး”
“ဒီဘက်မှာ အမ .. အဲဒီ အုန်းတန်းလေး ပါအောင် ရိုက်ပေးပါနော်”
ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်ရောက်နေလုတဲ့ သျှင်နေမင်းရဲ့ အပူဟာ ကျနော့်မျက်နှာပေါ်ပဲ စုပြီး ကျနေသလား မသိဘူး။ တော်တော်တော့ မျက်နှာပူတာပဲ .. ဟီး။ လူကို ဘယ်လိုနေလို့ နေရမှန်းကို မသိဘူး။ အပွင့်အပြောက်တွေပါတဲ့ ကမ်းခြေစတိုင် ချည်သားဂါဝန် အပြာလွင်လွင်လေး ၀တ်ထားပြီး ပဲပေးနေတဲ့ ယွန်းကို ကြည့်ပဲနေရမလား၊ မျက်နှာကို တခြားလွှဲထားရမလား .. ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိဘူး။ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုသဘောကောင်းပြီး သူများကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ သဘောတူလိုက်တဲ့ သဲကိုလည်း ဘာပြောရမှန်း မသိဘူး။ ဟူးးးးး .. ခက်တော့တာပဲ
“လှတယ် သိလား .. အဲဒီ ၀တ်စုံလေးနဲ့ .. ဒီဇိုင်းကမိုက်တယ်”
“ဟုတ်လား .. အမ .. ဒါက ဒီရောက်မှ ၀ယ်တာ .. ဟိုတယ်ရဲ့ boutique ထဲမှာ ရှိတယ် .. ဈေးတန်တယ်သိလား”
“ဟုတ်လား .. ကိုကြီး .. ဒီမှာကြည့်ပါဦး .. လှတယ်နော်”
သောက်ပလုတ်တုတ် … ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို ကိုယ့်ဟာကိုယ် မသီးခြင်ထောင်ထောင်ပြီး ဘောင်းဘီဘေးအိတ်နှစ်ဖက်ထဲ လက်ထည့်ပြီး ရပ်နေပါတာဆိုမှ ကိုယ့်လာပြီး အမှုပတ်နေပြီ .. ဟင်းးး ။ မယောင်မလည်နဲ့ အနားသွားရပ်လိုက်တော့ နန်းယွန်းဝေက ကျနော့်ကို အခုမှ သတိထားမိဟန်နဲ့ လှမ်းပြုံးပြတယ်။ ကျနော်တော့ သိတာပေါ့။ လူကိုနေရခက်အောင် တမင်တကာ လာပြီး ကလိတဲ့ အပြုံး။ သောက်ကောင်မလေး …
“ဖြောင်း .. ဖြောင်း !! .. မမရေ .. မမ .. လာတော့လေ … နေ့လည်ရောက်တော့မယ် .. တော်ကြာနေ တအားပူလာလိမ့်မယ်”
ပင်လယ်ဘက်ကို ဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ ငယ်ငယ်တို့ဆီက လက်ခုပ်တီးပြီး လှမ်းခေါ်သံ ကြားလိုက်လို့လား မသိဘူး .. သဲက ယွန်းရဲ့ ဖုန်းကို ကိုင်ထားရာကနေ ကျနော့်ဘက်လှည့်ပြီး ..
“ရော့ ကိုကြီး .. ဒီက ညီမကို ဆက်ရိုက်ပေးလိုက် .. ပြီးရင် သဲတို့ကိုလည်း လာရိုက်ပေးဦးနော်”
ဆိုပြီး လက်ထဲ ဖုန်းထိုးထည့်ပြီး အနားကနေ သုတ်သုတ်သုတ်သုတ်နဲ့ ထွက်သွားလေရဲ့ ။ ကျနော့်မှာ ယွန်းရဲ့ ဖုန်းကို ကိုင်ပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့။
“ဘယ်လိုလဲ .. ကိုထွန်း .. လန့်သွားတာလား .. ခိ ခိ”
လူချင်းအနားတိုးလာပြီး မချိုမချဉ်ရုပ်ကလေးနဲ့ မျက်စိတစ်ဖတ်မှိတ်ပြီး မေးလိုက်တော့ ကျနော့်မှာ မလုံမလဲနဲ့ အနားမှာ မရှိတော့သည့်တိုင် ရေထဲဆင်းသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ သဲကို လှမ်းကြည့်မိသေး (လှေနံနှစ်ဘက်နင်းချင်တဲ့ ယောက်ျားတွေများ အခက်သားနော် .. တော်တော်ဒွတ်ခ ခံရတာပဲ .. ဟီး)။
“စိတ်မပူပါနဲ့ … ကိုထွန်း … ယွန်းကို I value you ဆိုပြီး ပြောခဲ့မှတော့ .. ယွန်းကလည်း ကိုထွန်းကို အလေးထားပါတယ် .. ယွန်းကြောင့် ကိုထွန်းဘက်မှာ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရပါဘူး .. ယွန်းဘက်ကိုလည်း …”
“အာ .. မဟုတ်တာ .. ကိုယ် အဲ့လိုမျိုး လူမဟုတ်ပါဘူး .. ဖြစ်ခဲ့ကြတာကလည်း”
သူ့စကားမဆုံးခင် ၀င်ပြောပြီးမှ .. ယွန်းနဲ့ ကျနော်နဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူမို့ ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါလို့ ပြောဖို့ ကျနော် စဉ်းစားလိုက်ပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ အဲဒီစကားကို ဆက်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ တစ်မျိုးပဲဗျာ။ လည်ချောင်းထဲ တစ်ခုခု ရောက်နေသလိုလိုပဲ .. ။ ကျနော်က အဲ့လို စကားရပ်သွားတဲ့ အချိန် .. ယွန်းက မျက်လွှာလေး ၀င့်ကြည့်ပြီးတော့
“As per own consent ပေါ့ ကိုထွန်းရယ် .. ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးမနေနဲ့”
“That’s right .. ဟုတ်တယ် .. ဟုတ်တယ် .. ယွန်းပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ .. ဟီး”
“ခိ .. ခိ .. အဲ့လို နေပါ .. ရုပ်ကြီးကလည်း .. ခိ ခိ”
နှစ်ဦးသားကြား နားလည်မှုတစ်ခုကို သဘောတူညီစွာ ရရှိ်သွားပြီးနောက် ကျနော့်ရင်ထဲက ခံနေတဲ့ အလုံးကြီး ကျသွားပြီး အခုမှပဲ ပြုံးရယ်နိုင်တော့တယ်။ ယွန်းက ဒါကို သိလိုက်ဟန်နှင့် ပြုံးစိစိ မျက်နှာပေးနဲ့ ကြည့်နေတယ်။ ကျနော်လည်း အခုကျမှ အပြာရောင်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ယွန်းရဲ့ ကိုယ်ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး သေချာကြည့်မိတော့တယ်။
ကမ်းခြေဖက်ရှင်ဆိုပြီး ယွန်းဝတ်ထားတဲ့ ချည်သားဂါဝန်လေးက လည်တိုင်မှာ အစလေးနှစ်စပတ်ပြီး ထိန်းထားရတဲ့ အမျိုးအစားဗျ။ အပေါ်ဘက် ပုခုံးသားတလျှောက်မှာ ဘာအကာအကွယ်မှ မရှိလေတော့ စိုပြည်နုဖွေးနေတဲ့ အသားလေးတွေက ပကတိ်ုင်းအတိုင်းပဲ။ ဂါဝန်က ဘယ်လောက်ထိတောင် ရှင်းသလဲဆိုရင် ရင်သားမို့မို့နေရာလေးကျမှပဲ အ၀တ်စကို ပြန်တွေ့ရတာ။ နောက်ပြီး ဂါဝန်သားက အပါးစားဆိုတော့ လုံးလုံးမို့မို့ ရွှေရင်တွေရဲ့ အရိပ်ကို အတိအကျ မြင်နေရတယ်။ အာ .. အခုမှ ကျနော် သတိရတယ်။ ကျနော် ယွန်းရဲ့  စနေနှစ်ခိုင်ကို အကာအကွယ် မရှိဘဲ မမြင်ရသေးဘူး။ သူ့အသားအရည်က ဒီလောက် ဖြူလွှမှတော့ နို့လေးတွေလည်း ဖြူဖွေးနေမှာပဲ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကရော ..
(ဟိုက် !! .. ငါ ဘာတွေ တွေးနေတာပါလိမ့်)
ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် လျှောက်တွေးနေမိတာ ပေါင်ကြားက အငယ်ကောင် .. ၀တ်ထားတဲ့ ချည်သားဘောင်းဘီပွရဲ့ ဂွကြားကို ထောက်သလို ဖြစ်တော့မှာပဲ ကိုယ့်အတွေးကိုယ် ရပ်ရကောင်းမှန်း သိတော့တယ်။ ပေါင်လည်လောက်ပဲ ရှိမယ့် ဂါဝန်ကြောင့် မြင်နေရတဲ့ ခြေသလုံး ဖွေးဖွေးလေးတွေ ဆက်မကြည့်ရဲတော့ဘူး။ ယောင်ယမ်းပြီး လက်နဲ့တောင် ဘောင်းဘီရှေ့ကို ကာမိမလိုဖြစ်တော့ ကျနော် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိသွားတဲ့ ယွန်းက ခစ်ခနဲ ရယ်ပြီး၊ ပြုံးစိစိ မျက်နှာပေးနဲ့ ပင်လယ်ဘက်ကို လျှောက်သွားလေရဲ့ ။ ကျနော်လည်း သူ့ဖုန်းက ကိုယ့်လက်ထဲမှာဆိုတော့ နောက်ကနေ ကော့ကော့ကော့ကော့နဲ့ လိုက်ရတာပေါ့ (တကယ်လည်း ကော့ကော့ကြီး ဖြစ်နေတာ .. ဟီး)
ပို့စ်အမျိုးမျိုး ပေးနေတဲ့ နန်းယွန်းဝေကို ဖုန်းထဲက ကင်မရာမြင်ကွင်းထဲကနေ တစ်မျိုး၊ ကင်မရာ ပြင်ပက မြင်ကွင်းထဲကနေ တစ်ဖုံ .. ကျနော် စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်မိသွားတယ်။ မကြည့်လိုမှ မရတာကိုး .. ဒုံပတ်ရိုက်ပေးနေရတာလေ။ အမယ် .. အဲဒီ ငတိမလေးကလည်း ပို့စ်တော်တော် ပေးတတ်တာ။ မယ်တော် (မော်ဒယ်လ်) သင်တန်းများ တက်ထားသလား အောက်မေ့ရတယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းပေါ်မှ ခပ်ကွေးကွေး မြှောက်ပြီး အသည်းပုံလုပ်ပြတဲ့ ဟန်လဲ ပါတယ်။ ဦးထုပ်ကို လေထဲလွင့်သွားဟန်နှင့် မြှောက်ပြတာလဲ ပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး သောင်ပြင်ပေါ်ကနေ လေထဲမြှောက်အောင် ထခုန်တဲ့အချိန်ကို ရိုက်ပေးပါဆိုပြီး လုပ်ပြတာလဲ ပါသေးတယ်။
သူ ပို့စ်အမျိုးမျိုးပေးနေတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်မှာ သူ့ကိုယ်ပေါ်က လှုပ်ရှားနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကြည့်ပြီး လူက အာခေါင်ခြောက်၊ ရေငတ်ချင်သလို ဖြစ်နေတာ။ ခက်တော့လည်း အခက်သားလားဗျ။ သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ပြောဆိုဆက်ဆံရရင်တောင် တခါတခါ ယောက်ျားလေးတွေက လောင်တီးတတ်တာ မဟုတ်လား။ အခုဟာက ကိုယ်နဲ့တစ်ခါ လိင်ဆက်ဆံပြီးသား ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးနေရတာလေ။ ကျနော့်ကောင် အဲဒါမှ မမတ်ဘူးဆိုရင် ပန်းသေနေလို့ပဲ ဆိုရတော့မယ် .. ဟီး tongue emoticon
“ကိုထွန်းရော .. ဓါတ်ပုံ မရိုက်ဘူးလား .. ပေးလေ .. ယွန်းရိုက်ပေးမယ်”
“ကောင်းသားပဲ .. တစ်ပုံ နှစ်ပုံလောက် ရိုက်ပေး”
သူ့ပုံတွေ ရိုက်လို့ ပြီးသွားတော့ ယွန်းက ကျနော့်ကို အလိုက်တသိနဲ့ မေးတော့ ကျနော်လည်း ငြင်းဆန်မနေတော့ဘဲ သူ့လက်ထဲ ကျနော့်ဖုန်းကို ထိုးပေးလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကျနော်လည်း ကမ်းခြေ ရောက်မှတော့ ဒုံပတ်လေး ဘာလေး ရိုက်ချင်သေးတာပေါ့။ ဖေ့ဘုတ်မှာ ပရိုဖိုင်းပုံလေး ဘာလေး ပြောင်းရဦးမယ်လေ။ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ပုံက လက်ကလေးနှစ်ဖက်ယှက်ပြီး ပေါင်ဂွကြားကို ကာထားတဲ့ အနေအထားလေး ဖြစ်နေတာ တစ်ခုပဲ .. ဟီး
“ဝေးးးး … ကိုကြီး .. ကိုကြီး …ဒီမှာ … ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဦး”
“အေး .. လာပြီ … လာပြီ”
နဲနဲကြာသွားတော့ ရေထဲရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ဟာလေးတွေ အသံစာစာနဲ့ လှမ်းအော်ခေါ်နေကြပြီ။ ယွန်းကလည်း အတော်နားလည်ပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ကျနော့်ဖုန်းကို ပြန်ပေးပြီး bye for time being .. c u လို့ ပြောပြီး မျက်စိတစ်ဖက် မှိတ်ပြပြီး အနားက ထွက်သွားတယ်။ ကျနော့်မှာ သူဘာကို ဆိုလိုသွားမှန်း အဲဒီတုန်းက စဉ်းစားဖို့ အချိန်မရလိုက်ဘူး။ ရေသူရဲမလေးတွေကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပေးဖို့ ကမ်းစပ်ကို အပြေးအလွှား ဆင်းသွားရတယ်။ တဟေးဟေး တ၀ါးဝါးနဲ့ အချင်းချင်း စနောက်ပြီး ကဲနေကြတဲ့ ဟာလေးတွေကို ဓါတ်ပုံဆက်တိုက်ရိုက်ပေးပြီးနောက်၊ ကိုယ့်စိတ်က တစ်မျိုးဖြစ်လာတာနဲ့ ကမ်းခြေဘက်ကို ပြန်ကြည့်မိတော့ ယွန်းကို မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ ကျောပေါ်မှာ တွေ့တယ် (ချောင်းသာကမ်းခြေမှာ မြင်းငှားစီးလို့ရပါတယ်)။
သွဲ့သွဲ့လေး တိုက်ခတ်နေတဲ့ လေပြည်ကြောင့် ယွန်းရဲ့ ခါးမှာ ချည်ထားတဲ့ ပုဝါလေးဟာ တလူလူ လေထဲမှာ လွင့်နေလေရဲ့ ။ ကိုယ်ကိုခပ်မတ်မတ် အနေအထားနဲ့ အုန်းခွံရောင်မြင်းကြီးကို အသားကျ စီးနင်းသွားတဲ့ ယွန်းရဲ့ အသွင်ဟာ အင်မတန်မှ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ အဝေးက မြင်နေရပေမယ့် သိသာနေတယ်။ ရေကူးဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကဲနေကြတဲ့ သဲတို့က ကျနော့်စိတ်ကို တော်တော်များများ ကြီးစိုးထားသည့်တိုင် တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ ယွန်း မြင်းစီးနေတဲ့ နေရာကို လှမ်းကြည့်နေသေးတယ် (ယောက်ျားများ ခက်ပါတယ်နော် .. ခိ ခိ)။ ဘယ်လောက်တောင်မှ ဆိုးသလဲဆိုရင် သောင်ပြင်မှာ မြင်းတစ်ပတ်စီးပြီးလို့ ယွန်းမြင်းပေါ်ကနေ ဆင်းမယ်လုပ်တော့ မြင်းထိန်းကောင်လေးက သူ့ခါးလေးကို ထိန်းပြီး အောက်ချပေးတာ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်ပြီး လူက တစ်မျိုးဖြစ်သွားသေးတယ် .. ခွီး။ နောက်မှ ငါ့နှယ်နော်ဆိုပြီး အကြည့်ကို ပင်လယ်ဘက်ပဲ ပြန်လှည့်ထားလိုက်တယ်။
ယွန်းကလည်း မြင်းစီးပြီးတဲ့နောက် သောင်ပြင်မှာ ဆက်မနေတော့ပါဘူး။ ဟိုတယ်ဘက် ပြန်သွားတာ တွေ့တယ်။ ကျနော်လည်း အဲဒီတော့မှ စိတ်ဒုန်းဒုန်းချပြီး သဲတို့ကို သူတို့ကျေနပ်အောင် ဓါတ်ပုံ ဆက်ရိုက်ပေးနေလိုက်တယ်။ အမယ် .. မချောတို့က ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ဆိုတော့ ရေထဲကနေ ပြန်မတက်ချင်ဘူးရယ်။ ပင်လယ်ရေ အ၀စိမ်မယ်။ ညနေကျရင် မဆင်းတော့ဘဲ ကျောက်မောင်နှမ သွားမယ်လုပ်ကြရော။ ကျနော်လည်း ကောင်းပြီ .. သဘောပဲ .. ဒါဆိ်ုရင် ညဘက် အားလုံးစုပြီး ပါတီသဘောမျိုး လုပ်ရအောင် ဂစ်တာသွားငှားလိုက်ဦးမယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီး ရေစပ်ကနေ အပေါ်တက်လာမယ် အပြု .. ကျနော့်ဖုန်းကနေ တောင်ခနဲ မက်ဆိတ်သံထွက်လာတယ်။ ဘာများလဲဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ဗိုက်ဘာကနေ ပို့လိုက်တာ ကိုယ့်မသိတဲ့ နံပါတ်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု ..
ပို့လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်လိုက်တော့ ..
ဂလု .. လည်ချောင်းထဲ ရောက်လာတဲ့ တံတွေးကို အလျှင်အမြန် မျိုချလိုက်ရတာ အသံတောင် မြည်သွားသလား မသိဘူး။ ယွန်းရယ်လေ .. တကိုယ်လုံးမှာ Lingerie အမျိုးအစား ဇာအတွင်းခံ ၀မ်းဆက်လေး ၀တ်ထားပြီး ဆယ်ဖီရိုက်ထားတာ။ တကိုယ်လုံးပုံ ရိုက်ပြီးမှ မျက်နှာတော့ မပါအောင် ဖြတ်ပြီး edit လုပ်ထားလို့လား မသိဘူး။ တောင့်တင်းဆူဖြိုးတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်က အစိတ်အပိုင်းတွေ တော်တော်များများဟာ စကရင်ပေါ်မှာ အကြီးစား မြင်နေရတယ်။ အနက်ရောင် ဇာပန်းပွင့်တွေနဲ့ အတွင်းခံလေးနှစ်ခုကလည်း စတိုင်လ်ကလည်း အလန်းစားဆိုတော့ ဖြူဖွေးနေတဲ့ သူ့အသားအရည် နောက်ခံနဲ့ တအားကို စွဲမက်ဖို့ ကောင်းနေတယ်။ ငြိမ်သွားသလို ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ကောင်က ချက်ချင်းကို ပြန်မတ်လာတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ တောင်ခနဲနဲ့ နောက်ထပ် မက်ဆိတ်ဝင်လာတယ် … ဘာများလဲဆိုပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ..
ဘာရတော့မလဲ .. လာထား ကြာသလားပေါ့။ ညဘက်မှာ ပါတီလုပ်ရင် တီးဖို့ဆိုပြီး ဂစ်တာသွားငှားမယ်ဆိုတဲ့ ခြေလှမ်းတွေက ဟိုတယ်ဘက်ကိုတော့ ပြန်တက်သွားပါရဲ့ ။ ဒါပေမယ့် လော်ဘီဘက် မဟုတ်ဘူး။ အခန်းနံပါတ် ၂၀၂ဘက်။ ဒါမျိုးဆို မှတ်ဥာဏ်က သိပ်ကောင်းတယ်။ ပုံမှန်ဆို လူနာမည်တွေတောင် ဝေေ၀၀ါးဝါးနဲ့ သိပ်မမှတ်မိတဲ့လူက ဒီလိုမျိုးအခန်းနံပါတ်ကျတော့ မမေ့တဲ့အပြင် ဒါရိုက်ရှင်တောင် မေးနေစရာမလိုဘူး။ ဦးတည်ရာမဲ့ဆိုပေမယ့် ဒီနေရာကျတော့ နှာခေါင်းက အချက်ပေးနေလို့လား မသိဘူး။ တန်းကို ရောက်သွားတာ .. အဟီး tongue emoticon
“ဒေါက် .. ဒေါက်”
တံခါးကို သုံးချက်ပြည့်အောင်တောင် မခေါက်လိုက်ရပါဘူး။ နှစ်ခေါက်ပဲ ခေါက်ပြီး သုံးချက်မြောက် မထိခင်မှာပဲ ကျွီခနဲ ပွင့်သွားပြီး၊ လူတကိုယ်စာ ၀င်သာလောက်တဲ့ အဟလေး နောက်ကွယ်ကနေ နန်းယွန်းဝေ ပေါ်လာတယ်။ ဒုံပတ်ထဲကလို အတွင်းခံ တူးပိစ်လေးနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုတယ်က ပေးထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အဖြူကြီး ကိုယ်မှာ ပတ်ထားလျက်နဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအနေအထားကိုက ကိုယ့်ကို ဘာအတွက်စောင့်နေတယ်ဆိုတာ သိသာစေတယ်လေ။ အရောင်တွေလက်ပြီး ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေရဲ့ အကြည့်ကိုတောင် ဘာသာပြန်နေစရာမလိုဘူး။
စကားလုံးတစ်လုံးပဲ ပါးစပ်ကနေ ထွက်ခွင့်ရလိုက်တယ်။ နောက်ထပ် ဘာမှတောင် မပြောဖြစ်လိုက်ဘူး။ တံခါးကိ်ု ဖြတ်ပြီး အထဲဝင်လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်လက်ကို ဆွဲပြီး ဆောင့်သွင်းလိုက်တာ လူတောင် နဲနဲယိုင်သွားတယ် (တကယ်ဆို ကျနော်က ဘော်ဒီမသေးပါဘူး .. ဒါပေမယ့် နန်းယွန်းဝေဆိုတဲ့ အဲဒီကောင်မလးက ဆူဆူဖြိုးဖြိုးလေးဆိုတာ့ အားပါလှတယ်.. ခိ :P)။
လူက မျက်လုံးပြုးပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်၊ ယွန်းက တံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးနောက် လက်နှစ်ဖက်ဆန့်ပြီး လူကို ဆွဲဖက်လိုက်တာ မသိရင် မုဒိန်းကျင့်သလားတောင် ထင်ရမယ် (အားနွဲ့သူပါ ရှန် … ချမ်းသာပေးပါလို့ ပြောရမလားတောင် မသိဘူး .. အဟိ :D)
နှုတ်ခမ်းတွေ ဖိနမ်းတယ်ဗျာ .. စုပ်ဆွဲတယ် .. လျှာနဲ့ထိုးပြီးတော့ ဆွတယ် .. ဒါတွင်ပဲလားဆိုတော့ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။ လူကို တွန်းတွန်းပြီး ခေါ်သွားတာ၊ ကျနော်က နောက်ပြန်နောက်ပြန်နဲ့ အခန်းအလယ်က မို့ရာနားရောက်ပြီး ကုတင်နဲ့ ၀င်တိုက်၊ မို့ရာပေါ် ဖင်ထိုင်လျက်ကျ၊ ယွန်းက ကျနော့်ပေါ် တက်ဖိပြီးမှောက်ကျတော့ နှစ်ယောက်သား မို့ရာပေါ်မှာ ကျနော်က အောက်ကပက်လက်၊ သူက အပေါ်ထပ်လျက်ပေါ့။ လူက မို့ရာပေါ်တောင် အကုန်လုံး ရောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ခြေထောက်တွေက အောက်မှာ တစ်ဆစ်ချိုး အနေအထားနဲ့။ အတော်တော့ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲသွားတာ။ မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး ကိုယ်ကိုနောက်ဆုတ် နောက်ဆုတ်နဲ့ ကုတင်ပေါ် လုံးလုံးရောက်အောင် ကြိုးစားလိုက်ရတယ်။ တော်တော်တော့ ရုပ်ပျက်တာပဲ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် နမ်းတာကို မခံနိုင်လို့ နောက်ဆုတ်နေရတာလေ .. ဟီး grin emoticon
နမ်းတယ်ဆိုလို့ ပါးစပ်ချင်း ထိထားယုံပဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ မို့ရာပေါ်မှာ နေရာကျပြီလဲဆိုရော .. ယွန်းက ကျနော့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှကို အကုန်ဆွဲချွတ်တော့တာ (လက်တွေ ပါသေးတယ်)။ အော် .. ပြောဖို့မေ့နေလို့ .. ဒီအချိ်န်မှာ ယွန်းကိုယ်ပေါ်မှာက မျက်နှာသုတ်ပုဝါ မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် မို့ရာပေါ်မရောက်ခင်ကတည်းက ကုတင်ဘေးက ကြမ်းပြင်မှာ ပုံပြီးတော့ ကျနေပြီ။
ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ယောက်သား အသက်ရှူသံပြင်းပြင်း၊ ရမ္မက်လှိုင်းတွေ ထန်နေကျတော့ စကားတွေ ဘာတွေ ပြောမနေဖြစ်ဘူးရယ်။ အဓိက လိုချင်နေတဲ့ အရာကို တစ်ယောက်စီက တစ်ယောက်ရဖို့သာ ဇောင်းပြင်နေကြတာလေ။ ကျနော့်ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေ ကုန်သွားလို့ ခပ်မာမာအနေအထားနဲ့ လိင်တံက ထွက်လာပြီဆိုရင်ပဲ ယွန်းက ခါးလည်လောက် လျှောဆင်းသွားပြီး စုပ်ဖို့ ပြင်တော့တာ။
“ယွန်း .. လာ .. ကိုယ့်မျက်နှာပေါ် ခွထိုင်လိုက်”
သောက်ကျိုးနဲ .. နှစ်ခါတောင် မပြောလိုက်ရဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ နင်ဂျာလား ထင်ရတယ်။ ကိုယ်ကဖြတ်ခနဲလှည့်ပြီး ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းက ကိုယ့်မျက်နှာကို ဟိုဘက်ဒီဘက် ခွရက်သား ရောက်လာတာ။ ယွန်းဝတ်ထားတဲ့ Boyshort လို အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ဇာအနက်ရောင် အတွင်းခံလေးက အသားရယ်လို့ ရှိတယ်မဟုတ်ဘူး။ ဒီဇိုင်းအလှဖော်ထားတဲ့ အကွက်အပျောက်တွေကြားမှာ ဖြူဝင်းလှတဲ့ ယွန်းရဲ့ အတွင်းသားတွေက စိတ်ထစရာ မြင်နေရတာ။ မျက်နှာတည့်တည့်ပေါ် ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ အနီးကပ်ဆိုတော့ ခပ်ယဉ်ယဉ် အဖုတ်နံ့လေးပါ ရနေတာဗျ။ ဘာရတော့မလဲ။ အဖုတ်ဝကို ဖုံးနေတဲ့ အတွင်းခံအစလေးကို ဘေးကို ရအောင်တွန်းထုတ်ပြီး၊ လွတ်ထွက်လာတဲ့ အကွဲကြောင်းကို လျှာပြားနဲ့ကပ်ပြီး လျက်ပစ်လိုက်တော့ပေါ့ …
“အု … အိ … အိ”
ကောင်းလား၊ မကောင်းလားဆိုတာ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့်လီးထိပ်ကို ငုံထားပြီ ဖြစ်တဲ့ ယွန်းပါးစပ်ကနေ အုအုအိအိ သံတွေ ထွက်လာတာက သက်သေခံနေတာပေါ့။ ဒါမျိုးကြားရတော့ အဖုတ်လျက်နေတဲ့ ကျနော်တို့လိုမျိုး ယောက်ျားလေးတွေအဖို့ ပိုပြီးတော့ မာန်တက်စရာ ဖြစ်တာပေါ့။ ငါကွ … လီးတစ်ခုထဲ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး .. လျှာလည်း ကောင်းတယ်ပေါ့ .. ဟီး (ဂုဏ်ယူစရာမရှိ ရှာကြံ ဂုဏ်ယူရတာပဲလေ .. ဂလိုပဲ 8))။
မျက်လုံးနှစ်လုံးစလုံး စုံလုံးမှိတ်၊ ပြည့်ဖြိုးတင်းရင်းတဲ့ တင်ပါးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို လက်နှင့်ပွေ့ထိန်းကိုင်ပြီး၊ ခေါင်းကို ကြွနိုင်သမျှ ကြွပြီး ပါးစပ်နဲ့ အပြည့်ထိကပ်နေတဲ့ အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို ဟင်းချိုရည် သောက်သလိုကို ရှူးခနဲ ရွှတ်ခနဲ နေအောင် လျက်လိုက်၊ စုပ်လိုက် မနားတမ်းကို လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ 69 အနေအထားနဲ့ မတစ်ပြန် ကျားတစ်ပြန် (ဘတစ်ပြန် ကျားတစ်ပြန်လို့ ပြောလို့ မဖြစ်ဘူး .. တော်ကြာနေ ဒုတ်ချင်းရိုက်တာ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ .. ဟီး) သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကျဲ ကြတဲ့ပွဲမှာ ဒီတစ်ခါတော့ ယွန်း ကျနော့်ကို မနိုင်ဘူးရယ်။ ဘယ်ရမလဲ .. အသက်က စကားပြောတယ်လေ .. ဟီး wink emoticon
ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ လိင်တံကိုတောင် စုပ်ပေးမနေနိုင်တော့ဘဲ ငုံလျက်သားကြီးနဲ့ တကိုယ်လုံး ကော့ပြန်တွန်းထိုးပြီး ပေါင်တွင်းသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လျက်နဲ့ ပြီးသွားတယ်။ တကယ်ပါဗျာ။ ရှမ်းမလေးဆိုတော့ အရည်ရွှမ်းတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ အပိုမဟုတ်ဘူး။ ထက်ခြမ်း ခြမ်းထားတဲ့ ဖရဲသီး စားလိုက်ရသလိုပဲ။ ပါးစပ်တစ်ခုလုံးတောင် ပေပွလို့။
“အီး .. ကောင်းတယ် .. ကိုထွန်းရာ”
အတော်ကြမ်းကြမ်း ပြီးသွားလို့နဲ့တူတယ်။ လီးစုပ်ပေးနေတာ ဆက်စုပ်မပေးနိုင်တော့ဘဲ ပါးစပ်ထဲကနေ ပြန်ထုတ်ပြီး၊ ခေါင်းက မို့ရာပေါ် စိုက်ကျသွားတယ်။ ဒီတော့ အရှိန်တက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော်ကပဲ ဦးဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ရတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ အချိန်ကလဲ သိပ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ရတဲ့အချိန်လေး လုပ်ရတာမှတ်လား။ လူကို လျှောပြီး ယွန်းအောက်က ထွက်၊ နောက်ဘက် ရောက်သွားတဲ့အချိန် ဖင်ပူးထောင်အနေအထားနဲ့ ရှိနေတဲ့ သူ့တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းတွေနောက်မှာ နေရာယူလိုက်တယ်။
“ကိုထွန်း .. အထဲမှာ မပြီးနဲ့နော် .. ကျန်တာက ယွန်းရှင်းတယ်”
ကျနော် ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ သိတဲ့ ယွန်းက မို့ရာပေါ်ကို ပါးကလေးတစ်ခြမ်း အပ်လျက်သားနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်ပြောမှ မွှန်ထူနေတဲ့ ကျနော် အခြေအနေကို သတိထားမိတယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ စွပ်စရာ အဖော်မရှိဘူး။ နိချည်းဖြစ်နေတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယွန်းပြောလိုက်တော့ စိတ်ရှင်းသွားတာပေါ့။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးမနေတော့ပါဘူး။ ဒီကောင်မလေး ဒီကိစ္စတွေ မသိတာမှ မဖြစ်နိုင်တာ .. မဟုတ်ဘူးလား
“ထည့်ပြီနော် … ယွန်း”
အမှန်က အပိုတွေ ပြောနေမိတာပါ။ အရည်တွေနဲ့ ပေပွနေတဲ့ စူဖောင်းဖောင်း အဖုတ်ဝကို လိင်တံထိပ်ဖူး ထိမိတာနဲ့ သူသိနေပါပြီ ..ဘာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ။ ခွင့်တောင်းသလို ဘာလိုလိုနဲ့ ပြောလိုက်ပေမယ့် ဒီနေရာက မသွင်းဖူးတဲ့နေရာမှ မဟုတ်တော့တာ။ ဒီတော့ ယွန်းက အွန်းးး ဆိုပြီး ပြန်ပြောတဲ့အချိန် လူက ခါးကော့ပြီး သွင်းပစ်လိုက်တယ်။ ကောင်းတယ်ဗျာ။ လူကို အီစိမ့်ပြီး ဇိမ်ကျသွားတာပဲ။ ဘာမှ မပါဘဲ လုပ်ရတာဆိုတာတော့ ပွတ်တိုက်မိတာတွေက ပိုပြီး ဖီးလ်ဖြစ်တာပဲ (ကိုယ့်ဆြာတို့ ကျနော်ပြောတိုင်းလည်း လိုက်မလုပ်ကြနဲ့ဦးနော် .. ဒါက အန္တရာယ်အတော်များတဲ့ ကိစ္စဗျ)
အကြောအချင်တွေ အထဲထိရောက်အောင် ကောင်းတဲ့အရသာက ပြန့်နှံ့သွားတော့ ဖြေးဖြေးခြင်းကနေ အရှိန်တင်တယ်တို့ ဘာတို့ လုပ်မနေတော့ပါဘူး။ စတာထွက်ကတည်းက ခြေကုန်သုတ်တော့တာပဲ။ တင်ပါးအိအိတွေကို ဆုပ်စွဲကိုင်ပြီး တဖန်းဖန်း တဖတ်ဖတ်နဲ့ မြည်အောင် လိုးတယ်ဗျာ။ ယွန်းဆိုတာ မို့ရာပေါ် ခေါင်းစိုက်ကျနေရာကနေ ခေါင်းကို ပြန်မထောင်နိုင်ဘူး။ တအီးအီး တအားအားနဲ့ကို နန်းစတော့ ညည်းနေတော့တာ .. မသိရင် အခန်းထဲမှာ အောကား ဖွင့်ထားတယ်လို့တောင် ထင်ရမယ်။
အဲဒီလို ငါးမိနစ်ကျော်ကျော် ဆယ်မိနစ်မရှိတရှိလောက် ဆက်တိုက်သောင်းကျန်းနေကြတုန်းမှာပဲ .. ရုတ်တရက်ဆိုသလို တဒေါက်ဒေါက်နဲ့ တံခါးခေါက်သံကို ကြားလိုက်ရတယ်။
မျက်စိစုံလုံးမှိတ်ပြီး တအီအီ တအာအာနဲ့ အော်နေတဲ့ ယွန်းက မကြားပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ဇာပန်းလေးတွေ ကွပ်ထားတဲ့ သူ့တင်ပါး ဖွေးဖွေးလုံးလုံးလေးတွေကို မျက်စိအရသာခံ ကြည့်ပြီး လိုးနေတဲ့သူဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆက်မပြတ်ဘူး။ ဒီတော့ အဲဒီတံခါးခေါက်သံကို ကြားတော့ ခေါင်းနပန်းကြီးသွားပြီး လူက လှုပ်ရှားမှု အလိုလို ရပ်သွားတယ်။ ကိုယ်ငြိမ်သွားတော့ ယွန်းရဲ့ အော်သံကလဲ ပျောက်ပြီး၊ အဲဒီတော့မှ မျက်လုံးဖွင့် ခေါင်းထောင်ပြီး ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ကျနော့်ကို လှမ်းကြည့်တယ်။
“Housekeeping ပါ .. ခြင်ဆေးဖြန်းမယ်ဆိုပြီး ခေါ်ထားလို့”
သောက်ပလုတ်တုတ် .. ဘယ်သူက ဘယ်တုန်းက ခေါ်ထားရတာလဲ။ ကျနော်က ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံကြောင့် နားမလည်တဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ယွန်းကို ကြည့်လိုက်ချိန်၊ သူကလည်း လုပ်မိလုပ်ရာနဲ့ ယောင်နန ဖြစ်တာလား ဘာလား မသိဘူး။ ၀ုန်းဆို ကုန်းနေရာကထပြီး လာပြီ လာပြီဆိုပြီး မို့ရာပေါ်ကနေ ဆင်းသွားတယ်။ ကျနော်တောင်မှ ဘာမှ လှမ်းပြောချိန် မရလိုက်ဘူး။ အရည်တွေဗလပွနဲ့ လီးကလဲ တန်းလန်းကြီး ဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့တာပေါ့။
မို့ရာပေါ်က ဆင်းသွားတဲ့ မချောက အောက်ရောက်တော့ ကိုယ်လုံးတီးလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သတိရသေးတယ်။ သောက်ကောင်မလေးးးး … ဒါကျတော့ သိတယ်။ အစောတုန်းက ကုတင်ဘေးနားမှာ ကျနေတဲ့ ကိုယ်သုတ်ပုဝါကို ကောက်ပတ်ပြီး အခန်းတံခါးနား ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ မျက်လုံးပြူး၊ မျက်ဆံပြူး ဖြစ်ရတာ ကျနော်လေ။ အခုထက်ထိ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ မှတ်လား။ ချက်ချင်းပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂျက်ကီချန်း အသွင်ပြောင်းပြီး မို့ရာအောက်ဘက်က စောင်ကို ကိုယ်ပေါ် လှမ်းဆွဲတင်လိုက်ရတယ်။
အချိန်မီလေးပဲဗျာ .. စောင်ကိုယ်ပေါ် ရောက်သွားတဲ့အချိ်န် .. ယွန်းက တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ အပြင်ဘက်က စောင့်နေတာဖြစ်ရမယ့် ခြင်ဆေးဖြန်းမယ်ဆိုတဲ့ Housekeeping ကောင်မလေး ၀င်လာပါရော
သောက်ကျိုးနဲ .. အစောတုန်းက ရင်ထိတ်နေတဲ့ ကျနော် .. အဲဒီမှာ မျက်လုံးကို ဇီးကွက်လောက်ကို ပြူးသွားရပြန်ပါရော လား ….
ခြင်ဆေးဖြန်းမလို့ဆိုပြီး အခန်းထဲ ၀င်လာတဲ့ ကောင်မလေးက တခြားသူ ဟုတ်ရိုးလား။ ၀ါဆိုဦးဆိုတဲ့ ညတုန်းက ရီဆက်ရှင်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး။ ကြံရည်ရောင် ဟိုတယ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ လက်ထဲမှာ ဗူးရှည်ရှည်လေး နှစ်ခုကို ကိုင်လျက်သား (နောက်မှ သိတာ ခြင်ဆေးဗူးရယ်၊ ဖရက်ရှာဗူးရယ်)။ အံ့အားသင့်လွန်းလို့ မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ ကျနော့်ဘက်ကို မျက်ဝန်းတစ်ချက် ၀င့်ကြည့်ပြီး တံခါးနားရပ်နေတဲ့ ယွန်းကို လှမ်းနှုတ်ဆက်သလို ပြုံးပြတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ါဆိုဦးရဲ့ အပြုံးက မချိုမချဉ်နဲ့ ..။
"အော် .. တခြားသူမှတ်လို့ .. ၀ါဆိုပါလား .. ညီမက housekeeping လဲ လုပ်ရတာလား"
"မဟုတ်ဘူး အစ်မ .. ဒီနေ့ ဒီဘက်ခြမ်းကို တာဝန်ယူထားတဲ့ တစ်ယောက်က နေထိုင်မကောင်းလို့ ခွင့်ယူထားတာ .. guest တွေကလည်း များနေတော့ ညီမတို့ ရီစက်ရှင်က ၀ိုင်းကူရတာ …"
"တကယ် .. အဲဒါကြောင့် ချက်ချင်း ရောက်မလာတာလား"
"ဟုတ်တယ် .. အစ်မ .. နောက်ကျသွားတာ ဆောရီး .. နောက်ပြီး ရောက်ပြန်တော့လဲ ချက်ချင်း တံခါး မခေါက်ရဲလို့ .. ခိ ခိ"
"ဟုတ်လား … အစ်မ အသံ နဲနဲကျယ်သွားတယ်နဲ့တူတယ် .. ခစ် ခစ်"
"နဲနဲပဲလား အစ်မ .. ခိ ခိ"
ဟိုက် !! .. ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲဟ .. အခန်းထဲမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ထဲ ရှိသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နှာပေးတွေနဲ့ ပြောနေတာ။ ကျနော်က သူတို့ ပြောနေတာတွေကို မကြားနိုင်ရှာဘူးကိုး။
အစောပိုင်းတုန်းက တံခါးခေါက်သံ ကြားကြားခြင်း ရင်ထိတ်ပြီး လူက ထိတ်လန့်သလို ဖြစ်လို့ ခေါင်းက ဘာမှ စဉ်းစားလို့မရဘဲ freeze ဖြစ်သွားတာ။ အခုကျတော့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သေချာ သုံးသပ်မိလိုက်သလို၊ မခို့တယို့လိုမျိုး ဟန်လေးတွေနဲ့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရပ်နေကြတဲ့ ယွန်းရယ်၊ ၀ါဆိုဦးရယ်ကို ကြည့်ပြီး လူက အဖြေတစ်ခုကို ကောက်ချက်ချပစ်လိုက်တယ်။ ဒီလိုအနေအထားဟာ ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုမှ negative ဘက်ကို ပြနေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ negative မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူတို့နှစ်ယောက် ဆက်ပြောနေကြတဲ့ စကားတွေကိုသာ ကြည့်ကြပါတော့ …။
"အစ်မ .. ခြင်ဆေးဖြန်းမယ်ဆိုတာ"
"အော် .. အဲဒီ ကုတင်နားမှာ .. အစောတုန်းက လှဲနေတုန်း .. တ၀ီဝီနဲ့မို့"
"ဟုတ် .. ဖြန်းပေးခဲ့မယ်နော် .. Fragrance ပါ ထပ်ဖြန်းပေးခဲ့မယ် .."
"ကောင်းသားပဲ .. လုပ်ပါ .. မြန်မြန်လေး .. ခစ် ခစ်"
"ဟုတ် .. housekeeping ထပ်မခေါ်ရအောင် သေချာ လုပ်ပေးခဲ့မယ် .. ခိ ခိ"
အဲ့လိုပြောပြီး ၀ါဆိုဦးက စပ်ဖြီးဖြီးရုပ်ကလေးနဲ့ အနားရောက်လာမှတော့ ကျနော်လည်း ယောက်ျားလေးပီပီသသပဲ သူ့ကိုယ်လေးကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ်။ ခေါ်တောအားတစ်ထောင်လို့ ပြောရင်လည်း ရမှာပေါ့ .. ဟီး။ ပုံမှန်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သူ ဘယ်လောက်ချောချော ကျနော် ဒါမျိုး မကြည့်တတ်ပါဘူး။ အခုက အခြေအနေ မတူဘူးလေ။ ကျနော်နဲ့ ယွန်း ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သိပေမယ့် တံခါးပေါက်က လှည့်ပြန်သွားတာ မဟုတ်တဲ့ ကောင်မလေး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတာ ကျနော် သိနေတယ်၊ အဲ့လို သိနေတာကိုလည်း ခြင်ဆေးဗူးကို တရှူးရှူးနဲ့ ဖြန်းနေသည့်တိုင် ကျနော့်ကို တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်တောင်လေး ၀င့်ပြီး လှမ်းလှမ်းကြည့်တဲ့ ၀ါဆိုဦးပုံစံက confirm လုပ်နေတာလေ။
မိတ်ကပ်ပါးပါးလေး လိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာလေးက ချောလှတယ်လို့ မဟုတ်ပေမယ့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းတာကတော့ အမှန်ပဲဗျ။ နောက်ပြီး ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်သာ ၀ါဆိုဦးက ပိန်ပါးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်၊ ကိုယ်တိုင်းအတိနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းဝတ်စုံလေးရဲ့ အောက်မှာ ကောက်ကြောင်းလေးတွေက ရှိသင့်သလောက် ရှိတယ်။ မသိမသာလေး မောက်ထွက်နေတဲ့ နို့လေးတွေဟာ မန်းမြို့ တော်ပေါက်စီလောက်တော့ အသာလေး ရှိပါရဲ့ ။ ခါးကျင်ကျင်လေးအောက်မှာ ရှိတဲ့ တင်သားတွေဆိုရင်လဲ အရမ်းကြီး စွင့်ကားနေတာသာ မဟုတ်တာ၊ လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတော့ ဖြစ်နေတာပဲ။ ယွန်းနဲ့ ယှဉ်ရင် တစ်ယောက်တစ်မျိုးလို့ ပြောရမယ်။ တစ်ယောက်က ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဆူဆူဖြိုးဖြိုး ရှမ်းမလေး .. သူကတော့ သွယ်သွယ်လျလျနဲ့ ညိုချောလေး။
ကျနော်ရှိနေတဲ့ မို့ရာနားကို ကပ်လာတဲ့အချိန်မှာ ၀ါဆိုတစ်ယောက် စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာ အတတ်ပြောရဲတယ်ဗျာ။ ပေါက်စီလေးတွေက အပေါ်အောက် ခပ်သွက်သွက်လေး လှုပ်ခါနေတာလေ။ သေချာကြည့်နေတဲ့ ကျနော့်မျက်စိထဲမှာ ဒီဟာက ပြေးကိုမလွတ်ဘူး။
"ရပြီ .. အစ်မ .. သွားလိုက်ဦးမယ်နော် .. နှောင့်ယှက်သလို ဖြစ်သွားရင် ဆောရီး .. ခိ ခိ"
"ခစ် .. ခစ်"
"ဟို အစ်ကို သွားပြီးနော် .. တာ့တာ"
"ဟုတ် .. တာ့တာ .. ကောင်းကောင်းသွားဦးနော် .. ခြင်ဆေးဗူးတွေကိုလည်း တအားညှစ်မကိုင်ထားနဲ့ဦး .. ဟီး"
ဘယ်ရမလဲ .. ဒါမျိုးတော့ .. သူကတောင်မှ ပြုံးတုံ့တုံ့မျက်နှာလေးနဲ့ ဖြစ်နေသေးတာဆိုတော့၊ ကျနော်လည်း အထာလေးနဲ့ ပြန်နောက်လိုက်တယ်။ အဆင်ပြေလား မပြေလားဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဆြာတို့ပဲ ဘာသာပြန်ကြည့်ကြပါ။ ၀ါဆိုဦးက ဟန်မူပိုပိုလေးနဲ့ ဟွန့်ခနဲ နှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံ့ ပြပြီးမှ အပြင်ကို ထွက်သွားတာလေ။
အခန်းဝကနေ ၀ါဆိုဦးပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ယွန်းက တံခါးကို ခပ်မြန်မြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို သဘောကျသလို ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နှာလေးနဲ့ ကျနော့်ကို လှမ်းကြည့်တယ်။ တကယ်ဆို ဒီဟာက ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းဆိုလို့ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ .. မို့ရာပေါ်ကနေ ကျနော် ၀ုန်းခနဲ ပြေးဆင်းသွားပြီး ဆတ်တငန့်ငန့် ဖြစ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ဆက်တယ်တို့ ဘာတို့ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုက အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ကောင်ဆိုတာလည်း ညစောင့်တုန်းက ကိုမြင့်မောင်လို့ တောက်လျှောက် မကျတမ်း မာနေနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး (အဲ့လောက် မသန်ပါဘူး .. ခိခိ)။ ၀ါဆိုဦး ၀င်လာကတည်းက လန့်ဖြန့်ပြီး ငြိမ်သွားတာ။ အခုကျတော့ ငုတ်တုတ်လေး ဖြစ်နေပြီ။
ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီလိုဗျ .. ယွန်းကို ကျနော် ပြေးဆွဲပြီး ဇာတ်လမ်းဆက်မယ်ဆိုပြီး မတွေးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့လို လုပ်ချိန်မရခင်မှာ ဖုန်းဝင်လာတာ .. ။ တခြားသူ ဟုတ်ရိုးလား။ ကျနော့် သက်ဆိုင်သူထံက .. သူတို့တွေ ရေထဲက ပြန်တက်လာပြီး နေ့လည်စာ စားကြတော့မယ် .. ကျနော် ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုပြီး လှမ်းမေးတာ။ ဒီတော့ .. ကျနော့် ဘာလုပ်ရမလဲ။ အသံမတုန်အောင် ကမန်းကတမ်း ဖြေပြီး .. အခန်းပြန်လာပြီဆိုပြီး လုပ်ရတာပေါ့။ ကျနော် ဒီလိုပြောနေတာကို ယွန်းကလည်း ကြားပါတယ်။
မကြည်မလင် မျက်နှာပေးလေးနဲ့ ရှိနေပေမယ့် တားတော့ မတားရှာပါဘူး။ ကျနော် အ၀တ်တွေကို ပြန်ဝတ်တာကို ခပ်တွေတွေလေးနဲ့ ငေးကြည့်နေတာပဲရှိတယ်။
သွားမယ်နော်လို့ .. ကျနော်ပြောပြီး လော်ဘီဘက်ကို မပြေးယုံတမယ် ထွက်လာခဲ့ရတယ်။ တော်သေးတယ်။ ယွန်းနေတဲ့ အခန်းက လော်ဘီနဲ့နီးတော့ ရီစက်ရှင်ကို ချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ အဲဒီမှာ ဂစ်တာငှားတော့လဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ရတော့ ဂစ်တာဆွဲပြီး ကိုယ့်အခန်းဘက် တက်သုတ်ပြန်ရိုက်ရတာပေါ့။
အဲဒီနောက်တော့ ညဘက်ရောက်တဲ့အထိ တခြားထူးထူးထွေထွေ ထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ နေ့လယ်စာကို ဟိုတယ်မှာပဲ စားတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးငှားပြီး ကျောက်မောင်နှမဘက်သွားတယ်။ တော်တော်တော့ မောင်းရတာဗျ။ အကျင့်မရှိရင် မလွယ်လှဘူး။ သောင်ပြင်ကို ဖြတ်ရတာကိုး။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ အဲဒီနေရာက မခက်ဘူး။ ခက်တာက ကွန်ကရစ်လမ်းလေးကနေ သောင်ပြင်ကို ရောက်ဖို့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာ သဲဖြူတွေကို ဖြတ်ရတာ။ အဲဒီဟာက တစ်ချက်မှားသွားရင် ဆိုက်ကယ်လဲသွားမှာ။
ကျောက်မှောင်နှမက အပြန်ကျတော့ သဲတို့က ချောင်းသာဈေးထဲဝင်ပြီး အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေ ၀ယ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ညနေကျရင် အကင်နဲ့တွဲပြီး သောက်ဖို့ဆိုပြီး ၀ိုင်ပုလင်းတွေ၊ ဘီယာပုလင်းတွေ ဆွဲကြတာပဲ။ အဲဒီမှာ တော်တော်ကြာတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ဈေးဝယ်တာလေ။ တစ်ယောက်ထဲတောင် မဟုတ်ဘူး။ သုံးယောက်မဟုတ်လား။ အားလုံးပြီးတော့မှ အထုတ်အပိုးတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ ဟော်တယ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။
ညဘက်ပါတီမလုပ်ခင် နောက်ထပ်လုပ်ကြတာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့လည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမှာ မဟုတ်တော့ ကျနော် အဲဒါတွေ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ ဦးတည်ပြောလိုက်ရရင် ကျနော်တို့ရထားတဲ့ sea view အခန်းရဲ့ ရှေ့ မှာ ၀ရံတာလိုဟာမျိုးလေး ရှိနေတော့ ညမှောင်သွားတာနဲ့ အဲဒီမှာ ၀ိုင်းဖွဲ့ကြတယ်။ ၀ယ်ထားတဲ့ ပုဇွန်ကင်တွေ၊ ငါးကင်တွေကို တစ်ခါသုံး ပန်းကန်ထဲထည့်၊ ဘီယာတို့ ၀ိုင်တို့ကိုတော့ ဈေးထဲက ၀ယ်လာတဲ့ ပလတ်စတစ်ပုံးထဲ ရေခဲအိတ်ခံပြီး ထည့်လို့ပေါ့။ (အဲဒီမှာ တခါထဲ ပြောရဦးမယ် .. ခြင်ကိုက်လား မကိုက်လားဆိုတာ .. လေတဖြူးဖြူးတိုက်နေတာတောင် ခြင်ဆေးခွေ ထွန်းထားရသေးတယ်)
အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတဲ့နောက်တော့ .. ကိုကြီး .. လုပ်ပါတော့ဗျို့ .. ချပါတော့ဗျို့ ဆိုပြီး ၀ိုင်းအော်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ် သုံးယောက်ကြောင့် (တော်တော်များတဲ့ ပရိတ်သတ်နော် .. ဟီး :P) ငှားထားတဲ့ ဂစ်တာကို ဖုန်းထုတ်ပြီး ကြိုးအရင်ညှိလိုက်တယ်။ ညှိလို့အဆင်ပြေပြီဆိုတော့ Carlsberg လေး တစ်ငုံသောက်၊ လည်ချောင်းရှင်းပြီး ပလပ်ကင်လေး အရင်တီးပြီး သံသေးသံကြောင်နဲ့ပဲ ဟဲလိုက်တယ် .. ခွီး grin emoticon grin emoticon
စကားပြောရင် အေးဆေးပြီး တည်ငြိမ်နေတာလေးရဲ့  .. အနမ်းပေးရင် ခေါင်းလေးငုံ့ ရှက်နေတာလေး ချစ်တယ် .. ပါးမို့မို့လေးထက်က စံပယ်တင်မှဲ့လေးရဲ့  ..ငါ့အတွက်ဆို အမြဲတမ်းမင်း ဂရုစိုက်တာလေး ချစ်တယ်
ညရဲ့ လက်တန့်တွေ ဖြစ်တဲ့ မှောင်ရိပ်တွေဟာ တစတစနဲ့ ချောင်းသာကမ်းခြေကို လုံးဝအုပ်စိုး ရစ်ပတ်လိုက်တဲ့အချိန် ရောက်လာခဲ့ပြီ။ လူလေး လေးယောက် ၀ိုင်းစုပြီး စားလိုက်၊ သောက်လိုက်၊ သီချင်းဆိုလိုက်နဲ့ ပြုလုပ်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ချောင်းသာကမ်းခြေ နှုတ်ဆက်ပွဲ ပါတီလေးဟာလည်း တော်တော်ကြီးကို အရှိန်ရတဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ ဖော့ပန်းကန်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ငါးကင်၊ ပုဇွန်ကင်တွေ ဆိုတာ အခုအချိန်မှာ ဒုတ်ချောင်းလေးတွေအဖြစ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ရေခဲစိမ်ပုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ အရာတွေဟာလည်း ဘာဆိုဘာမှ မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး သိပ်ပြီးတောင် မအေးတော့တဲ့ ရေတွေသာ ကျန်နေတော့တယ်။ ၀ရံတာမှာ ချထားပေးတဲ့ ဟိုတယ်ရဲ့ သစ်သားစားပွဲဆိုတာကတော့ မြင်မကောင်းအောင်ကို ရှုပ်ပွနေပြီ။
"ကဲ .. တော်လောက်ပြီ .. ငယ်ငယ်တို့ ပြန်ကြတော့ .. မနက်ကျမှ တွေ့မယ်"
"အွန်းးးးး .. ဟုတ် .. ကိုကြီး ... တာ့တာ"
ကျနော့် သက်ဆိုင်သူရဲ့  ညီမလေးဖြစ်တဲ့ ငယ်ငယ်က အဲ့လိုချစ်ဖုိ့ကောင်းတယ်။ ပြောလိုက်ရင် ပြောလိုက်တဲ့ အတိုင်းပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့လည်း တကယ်ဆို နှစ်ယောက်ထဲသွားရင် ရပေမယ့် သူပါလိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အဖော်ခေါ်ခဲ့ဆိုပြီး အတူတူ ခေါ်လာခဲ့တာ (ဒါက သပ်သပ်ရှင်းပြတာပါ .. မဟုတ်ရင် ဘာဖြစ်လို့ ချောင်းသာကို နှစ်ယောက်ထဲ မသွားတာလဲလို့ စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေ ရှိနေမှာစိုးလို့)။ တကယ်ဆို သဲအပါအ၀င် ငယ်ငယ်တို့တွေ သောက်ထားတဲ့အရှိန်နဲ့ အာလေးလျှာလေးနဲ့ တော်တော်မှန်နေကြတာ (မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အမြဲတမ်း ဒါမျိုးသောက်နေရတာ မဟုတ်ဘူးလေ .. တစ်ခါတစ်ခါမှ ကြုံရတာ မဟုတ်လား .. နေ့တိုင်း ပါတီ၊ ကလပ်တက်နေရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့)။ ဒါပေမယ့် မူးပြီးတော့ ရစ်တယ်တို့ ဘာတို့တော့ မရှိဘူး။ ပျော်တယ်ဆိုတာပဲ ရှိတာ။ ကျနော်က ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုတယ်။ သူတို့က သူတို့ရတဲ့သီချင်းဆိုရင် လိုက်ဆိုတယ်။ မရဘူးဆိုရင် သောက်လိုက်၊ စားလိုက်လုပ်တယ်။ ဒီလောက်ပဲ။ မူးပြီး ရုပ်ပျက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။
ဘာဖြစ်လို့ ကျနော် ဒါတွေကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြနေရတာလဲဆိုတော့ ဒီကောင် ကောင်မလေးသုံးယောက်နဲ့ သောက်ပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတော့ မူးပြီး ဂရုဆက်စ်တွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပဲလို့ တွေးထားတဲ့သူတွေ ရှိနေမှာစိုးလို့ပါ။ အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ပြောတဲ့ Unbelievable truth ဆိုတာ နောက်တော့ သိလာမှာပါ။
ငယ်ငယ်နဲ့ သိင်္ဂီ.. တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ထိန်းထားရင်းပဲ ကျနော်တို့နဲ့ကပ်လျက် ဟိုဘက်အခန်းကို ပြန်သွားကြတယ်။ သဲနဲ့ ကျနော်ပဲ ကျန်နေခဲ့တဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေကို ရှင်းရတယ်။ သဲကလည်း ငယ်ငယ်တို့လောက်သာ မမူးတာ သူလည်း မှန်နေတာဆိုတော့ ကျနော်ပဲ အများဆုံးလုပ်ရတာပါ။ သဲက နဲနဲပါးပါး သိမ်းပေးပြီးတာနဲ့ ကိုယ်လက်သန့်စင်မယ်ဆိုပြီး အခန်းထဲ ကြိုဝင်သွားရော။ အပြင်ဘက်မှာ အားလုံးပြီးစီးလို့ ကျနော် အခန်းထဲကို ဖွင့်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ..
"ကိုကြီး ... ချမ်းတယ် .. မြန်မြန်လာတော့"
ဟိုက်ရှားပါး !!! .. ကိုယ်တွေ အပြင်ဘက်မှာ အမှိုက်ထုပ်နဲ့ အလုပ်များနေတုန်း သဲက ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးတော့ ရှယ်ပြင်ပြီးထား ဖြစ်နေတာကိုး။ ဘယ်တုန်းက သူ့ဖာသာသူ ကျိတ်ဝယ်ထားမှန်း မသိတဲ့ ပန်းဆီရောင် (ပန်းရောင်ရင့်ရင့်စိုစို) အပေါ်အောက်တစ်ဆက်တည်း Lingerie နဲ့ဗျ။ အေက်ဘက်မှာ ပေါင်လည်လောက်အထိ ရှိတဲ့ အဖြူရောင် စတော့ကင်ကို ၀တ်ထားပြီး strap နဲ့ ပြန်တွယ်ထားသေးတာ။ ပုံမှန်ဆို ဒါမျိုးက ပင်တီနဲ့ တွဲလာပေမယ့် သဲက ၀တ်မထားဘူး။ မို့ရာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အနေအထားကလဲ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်အလှကို ပြချင်တဲ့အခါမှာ အပေါ်လွင်ဆုံးပုံစံဖြစ်တဲ့ တစောင်းအနေအထား။ အဲဒါကိုမှ ကျနော်ဝင်လာတဲ့ အခန်းတံခါးဝဘက်ကို ခေါင်းကလေးထောင်၊ မေးကိုလက်ကလေးထောက်ပြီး ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတာ။ (ကျနော်ပြောတဲ့ Lingerie ကို မျက်စိထဲ ပုံမပေါ်မှာစိုးလို့ ဆင်တူယိုးမှားဟာကို ရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်)
ကဲ .. ကျနော် ဘယ်လိုနေမလဲဗျာ .. ကိုယ့်ဆြာတို့ပဲ ကျနော့်နေရာကနေ ၀င်ခံစားကြည့်ကြပါဦး
တော်သေးတယ် .. လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိလို့။ မဟုတ်ရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ပြသလို ဘာကိုင်ထားကိုင်ထား လက်ထဲက လွတ်ကျကိန်းပဲ။ အကယ်၍သာ သဲသာ ဂစ်တာကို အထဲကို ယူမသွားပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒီနေရာမှာ လွတ်ကျလို့ ကျနော် မနက်ဖြန်ကျရင် ဂစ်တာဖိုး လျော်နေရလောက်ပြီ .. ဟီး tongue emoticon
လူဆိုတာ သွေးကိုပွက်ပွက်ဆူသွားတာပဲ။ ပေါင်ကြားက အငယ်ကောင်ဆိုတာကလည်း ချက်ချင်းကို မတ်လာတာ။ ဘာရတော့မလဲ။ ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အ၀တ်တွေကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး မို့ရာပေါ်ကို ဒိုင်ဗင်ပစ်ထိုးလိုက်တော့ .. မချောက အသင့်စောင့်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ အကွက်ကို ချက်ချင်းပြင်ပြီး ဒူးထောင်ပေါင်ကားပေးလိုက်တာ ဒိုင်ဗင်ပစ်ထိုးတဲ့ ကျနော့်ခေါင်းက ပေါင်ကြားထဲ ကွက်တိရောက်ပေါ့ .. အဟီး။ grin emoticon
လတ်တလော သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားတာ ဖြစ်ရမယ့် အဖုတ်အိအိလေးက အစိုဓါတ်လေးတောင် မပျောက်သေးဘူး။ ပြသနာ မရှိဘူး။ ဒီအစိုဓါတ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့က အီဖေကိုယ်တာဝန် မဟုတ်လား။ တာဝန်ဆိုတာ လက်မောင်းမှာ ရှိတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ လျှာဖျားမှာ ရှိတာဖြစ်သွားပြီ .. ငိ။ လျှာကို ထုတ်နိုင်သမျှ ဆန့်ထုတ်ပြီး အကွဲကြောင်းတလျှောက် အပြားလိုက်ကပ်ပြီး လျက်တင်ပစ်လိုက်တာ ...။
“အားးးးးး ..... ရှီး .... ရှီးးးးး”
ခေါင်းထောင်ပြီး ကြည့်နေတဲ့ သဲရဲ့ မျက်နှာလေးမှာ ရမ္မက်လှိုင်းတွေက ချက်ချင်းကို ပြန့်နှံ့သွားပြီး မို့ရာကို နောက်ပြန် တတောင်ဆစ်နဲ့ ထောက်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ထဲက တစ်ဖက်က ချက်ချင်းဆိုသလို ကျနော့်ခေါင်းကို လာဆုပ်ကိုင်တော့တယ်။ ကျနော်နဲ့ သဲနဲ့ဆိုတာ တစ်ရာသီစာ ကာလမှာမှ နှစ်ကြိမ်လောက် တွေ့ရတဲ့ ဘောလုံးကလပ်အသင်းတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။ အမြဲတမ်း ခြေစမ်းနေကြတဲ့ အသင်းတွေ။ သူဘယ်လိုအဆင်ချိုးရင် ဘယ်လိုအထာဆိုတာ သိပြီးသား။
ကော့တက်လာတဲ့ တင်ပါးအိအိလေး နှစ်ခုအောက်ကို လက်ဝါးထိုးခံ၊ ပင့်ဆုပ်ထားပြီး ပါးစပ်နဲ့ အဖုတ်နဲ့ မလွတ်တမ်းကို လျှာစွမ်းပြတော့တာ။ သဲဆိုတာ ကျနော့်ဆံပင်ကို ဆုပ်စွဲထားရင်း ထွန့်ထွန့်ကို လူးနေတာ။ ပါးစပ်ကလည်း ကိုကြီးကောင်းတယ် .. နာနာစုပ် .. အထဲကို လျက်ပေးဦး .. ကောင်းလာပြီ .. အစရှိသဖြင့် တောက်လျှောက်ကိုပြောနေတာ။ ကျနော်လည်း သူဘာလိုချင်သလဲ .. လိုချင်သလို လိုက်လုပ်ပေးရင်းကနေ .. နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာတော့ လက်ခလယ်ကို တိုက်စစ်အကူခေါ်လိုက်တယ်။ လျှာကိုတော့ အပေါ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ စိစိလေးထံပဲ စစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တယ်။ သိပ်တော့ မလုပ်လိုက်ရပါဘူး။
“အားးးးးးးး ... မရတော့ဘူး .... ကိုကြီး .... ဟာ .... ဟာ !!! ... ထွက် ... ထွက်ပြီ !!!!!!!!!!!!”
မီးသတ်ကား ဥသြဆွဲသလို သံရှည်ကြီးအော်ညည်းရင်း မို့ရာနဲ့လွတ်အောင် မြှောက်တင်ထားတဲ့ တင်ပါးက ၀ုန်းဆို ပြန်ပြုတ်ကျတော့တာပဲ။ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ဆိုတာလည်း ကျနော့်ခေါင်းကို ညှပ်ထားတာ မသိရင် ဂျူဒိုကစားနေတယ်တောင် ထင်ရတော့မယ်။
နဲနဲကြာသွားတော့မှ ချုပ်ထားရာကနေ ပြန်ဖြေပေးတယ်။ ၀မ်းလျားမှောက်ထားရာကနေ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကိုလည်း မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့ လှမ်းကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းလေးကို လှုပ်ယုံလှုပ်ပြီး လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ပြောတယ်။ ဘာပြောတယ်လို့ ထင်ကြလဲ .. ကိုယ့်ဆြာတို့ တွေးကြည့်ကြပါဦး ...။
တခြား မဟုတ်ပါဘူး .. I love you လို့ ပြောတာပါ (ဟိုဟာတွေ ဒီဟာတွေများ ပြောပြီလားလို့ လျှောက်မတွေးကြနဲ့ဦးနော် .. ဒါက အောစာအုပ်မှ မဟုတ်တာ)
အဲဒီနောက်တော့ ကျနော်လည်း ပါးစပ်တွေ ဘာတွေ ပြေးဆေးတာလုပ်မနေတော့ဘူး။ ပြောရရင် သဲက အဲဒီလောက် အနံ့အသက်မဆိုးဘူး။ အသေးစိတ်တော့ ပြောမနေတော့ဘူးဗျာ။ သဲက သူ့body odor ကို ထိန်းတယ်ပေါ့။ ဒီတော့ ရေမွှေးတို့ တခြားဟာတို့ သုံးပေမယ့်၊ မသုံးရင်လည်း သူ့ပင်ကိုယ်နံ့ကိုက မဆိုးဘူးဗျ။ ကဲ .. ဒါတွေ ထားလိုက်ပါတော့။ အဓိကကိုပဲ ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်လည်း လီးအထောင်သားနဲ့ သဲပေါင်ကြားမှာ နေရာယူလိုက်တယ်ပေါ့။
ကျနော့်မြင်ကွင်းထဲမှာတော့ သဲက တအားလှနေတာ။ အ၀တ်မပါဘဲ သဲကိုယ်လုံးလေးကို အမြဲတွေ့ဖူးပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ဆက်ဆီကျတဲ့ Lingerie အမိုက်စားနဲ့က ချစ်တင်းနှောတိုင်း တွေ့ဖူးတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ စိတ်ကတစ်မျိုးတစ်ဖုံ လှုပ်ရှားပြီး တက်ကြွနေတာ။ နိဒါန်းတွေ ဘာတွေ ပျိုးတယ်တောင် လုပ်မနေတော့ဘူး။ အရည်ကြည်တွေ စိုနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အဖုတ်ဝကို ကျနော့်ကောင်ဖိထောက်ပြီး မိမိရရ ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တင် ဖိသွင်းလိုက်တော့တယ်။ စိုစွတ်အိထွေးတဲ့ အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး တစ်ဝက်လောက်တိတိ ၀င်သွားတယ်။ ဖူးးးးး ကောင်းလိုက်တာဗျာ ..
သဲဆိုတာလည်း မျက်လုံးနှစ်လုံးကို စုံပြန်မှိတ် .. ကောင်းတယ် ကိုကြီးးးးးး ဆိုပြီး အားပေးသံလေးနဲ့ စညည်းတော့တာပဲ။ ကျနော်လည်း သဲက တစ်ချီပြီးထားပြီဆိုတော့ ညှာမနေတော့ဘဲ ကျန်နေတဲ့ ကျနော့် လိင်တံတစ်ဝက်ကို နောက်ထပ်တစ်ချက်ထဲနဲ့ ဖိသွင်းလိုက်ပြီးနောက် ချက်ချင်းကို ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး စလိုးမိတယ်။ သဲရဲ့ နို့လုံးအိအိတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ်ဆောင့်နေရင်းနဲ့က Lingerie ပေါ်ကနေ ဖိကိုင်၊ ဆုတ်ချေပေးတယ်။ နို့တွေကိုင်လို့ ကျေနပ်သွားတော့ သူ့ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကို မြှောက်ပြီး စုကိုင်ထားလိုက်တယ်။ မျက်နှာကျက်ကို ခြေတန်တွေ ဆန့်ပြီး ကန်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်း။ စတော့ကင်လေးတွေ ကွပ်ထားတဲ့ ခြေတန်တွေက ထူးထူးခြားခြား စိတ်ကိုထစေတယ်ဗျ။ ဒါတွေကို ပွေ့ဖက်ပြီး ဆောင့်လိုးရတာ တိမ်တွေပေါ် ပြေးနေသလိုကို ခံစားနေရတယ်။
အဲ့လို လုပ်နေရင်းက ကျနော် တော်တော်ကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အကြိုက်ဆုံး ပုံစံကို ပြောင်းဖို့ ဆိုပြီး သဲကို လေးဘက်ထောက် ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်။ ပြောသာပြောရတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ သဲက တစ်ချီထပ်ပြီးသွားတော့ လူက ခပ်ယဲ့ယဲ့လို ဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်ပဲ သူ့ကိုယ်လေးကို ထိန်းလှည့်ပြီး ကုန်းတဲ့ပိုစရှင်ဖြစ်အောင် ပြင်ပေးရတာ။ ဒါတောင် ခေါင်းကမထောင်နိုင်တော့ဘူး။ မို့ရာပေါ်မှာ ငိုက်စိုက်ဖြစ်နေပြီ။ အဖုတ်ဝလေးဆိုတာ လိုးထားတဲ့အရှိန်နဲ့ စိုလက်နေတဲ့ အထဲက ပန်းရောင်အသားတွေကို မြင်တောင် မြင်နေရတယ်။
သဲနှုတ်က ခါတိုင်းလို တီတီတာတာနဲ့ စကားတွေ ပြောပြီး ညည်းမနေနိုင်တော့ဘူး။ တအီအီ တအာအာနဲ့ မသဲမကွဲပဲ အသံထွက်နိုင်တော့တာ။ ကျနော်လည်း သဲမဟန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သိနေတော့ သိပ်အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘူး။ ပန်းရောင်ဇာသားလေးတွေ ကွပ်ထားတဲ့ ဖင်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အရှိန်တက်နေတဲ့ ကျနော့်ကောင်ကို အဖုတ်ထဲ ပြန်ထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်တော့ တင်သားတွေကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကိုယ်ဆောင့်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နောက်ကိုပါဆွဲယူပြီး မီးကုန်ယမ်းကုန်ကို လိုးပစ်လိုက်တော့တာပဲဗျို့  ...။
“အားးး ... ကောင်းတယ် .... ထွက် .. ထွက်ပြီ!!!”
ဒီတစ်ခါတော့ အော်ညည်းရတာ ကျနော်ဖြစ်သွားပြီး၊ နေ့လည်ကတည်းက ထွက်မလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သုတ်ရည်ပူတွေကို မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားရင်းက အင့်ကနဲနေအောင် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ မှန်တာပြောရရင် အဲဒီအချိန် တင်းတင်းမှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတွေထဲက အတွေးအာရုံမှာ မြင်ယောင်မိတာ နေ့လည်တုန်းက ဒီလိုမျိုးအနေအထားနဲ့ ကုန်းပေးထားတဲ့ ယွန်းရဲ့ ပုံစံလေးကိုပဲ (ယောက်ျားတွေဆိုတာ ခက်တယ်ဗျ .. ရမယ်ဆိုရင် လိုချင်ကြတာချည်းပဲဆိုတော့ .. အတွေးထဲမှာ grass is always greener on the other side ဖြစ်နေတာလေ) ............................။
သဲက တုတ်တုတ်တောင် မလှုပ်နိုင်တော့ဘဲ ကွေးကွေးလေးဖြစ်ပြီး အိပ်မောကျသွားတယ်။ သုံးချီတောင် ပြီးထားတဲ့အရှိန်ရော၊ သောက်ထားတဲ့ အရှိန်ရော၊ နေ့လည်တုန်းက ရေထဲမှာ ကဲထားတာရော အားလုံးပေါင်းတော့ သူဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲ။ ကျနော်လည်း သူ့နဲ့အတူ ခနလှဲနေသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခနနေတော့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့ဆိုပြီး ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်လာခဲ့တယ် (သဲရဲ့ သန့်ရှင်းရေးကိုတော့ ကျနော်ပဲ တစ်ရှူးနဲ့ လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် .. ရှင်းအောင် ပြောထားတာပါ .. တော်ကြာနေ ဒီအတိုင်းကြီး အိပ်ပျော်သွားတယ် ထင်မှာစိုးလို့)
အခန်းထဲမှာ အဲယားကွန်းဖွင့်ထားလို့ ချွေးတွေတအားမထွက်သည့်တိုင် လူက နေရတာ တစ်မျိုးဖြစ်နေတော့ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး ရှာဝါဖွင့်ပြီး ရေချိုးလိုက်တယ်။ ပြသနာက အဲ့လို ရေပန်းအောက် ၀င်လိုက်တော့ လူကလန်းသွားတယ်။ အိပ်ချင်စိတ် မဖြစ်တော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ အပြင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ချင်သလို ဖြစ်လာတာနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၀တ်စုံလေးဝတ်၊ ဖုန်းရယ် ဆေးလိပ်ဗူးရယ်ယူပြီး ခုနတုန်းက ပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ၀ရံတာကိုပဲ ထွက်လာခဲ့တယ်။ သစ်သားထိုင်ခုံတန်းလေးမှာ ၀င်ထိုင်ပြီး၊ စီးကရက်တစ်လိပ်ကို မီးညှိပြီး တစ်ချက်ဖွာလိုက်ပါရော။ ပြီးတော့ ဘာရယ်မဟုတ် အချိန်ဖြုန်းရင် လုပ်နေကြထုံးစံအတိုင်း ဖုန်းကိုထုတ်ပြီး တစ်ခုခုဖွင့်ကြည့်မယ် ကြံလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ viber မှာ မက်ဆိတ်တစ်ခု ၀င်နေတယ်။ ဘာများလဲဟုဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ..
ဒီနံပါတ်ကို ကျနော် မသိစရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ နေ့လယ်ကတင်မှ မက်ဆိတ်ဝင်ထားခဲ့တဲ့ ယွန်းရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်မှတ်လား။ လက်က အလိုလိုကို Call ဆိုတဲ့ သင်္ကေတလေးကို နှိပ်လျက်သား ဖြစ်သွားတယ်။ တူတူ တူတူ ဆိုတဲ့ သံရှည်နဲ့ ဖုန်းဝင်နေသံက နဲနဲတောင် ကြာသွားလို့ စိတ်မရှည်တော့ဘဲ ဖုန်းချမလို ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အပြေးအလွှား လာထူးတဲ့ ယွန်းရဲ့ အသံလေးကို ကြားလိုက်ရတယ်
"ဟယ်လို .. ဟယ်လို !!"
(ဟယ်လို ယွန်း)ဆိုပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပေမယ့် ဟိုဘက်က ယွန်းက ချက်ချင်းပြန်မဖြေဘူး။ ဖုန်းစကရင်နဲ့ နားနဲ့ ကပ်ထားတဲ့အထဲကနေ မပီမသအသံတွေ ကြားနေရတယ်ဗျ။ စကားပြောသံလိုလို၊ ရယ်သံလိုလိုနဲ့ .. မသဲကွဲဘူး။ (ဟယ်လို!!)ဆိုပြီး နောက်ထပ်တစ်ခါ ထပ်ပြောလိုက်မှ ယွန်းဆီကနေ ကသောကမျောသံလေး ထွက်လာတယ်။
"ကိုထွန်း .. အပြင်ထွက်လာလို့ရလား"
"မကောင်းဘူးထင်တယ် … ယွန်း" (စိတ်ထဲမှာတော့ ဟိုဘက်ခြမ်းက မြက်စိမ်းစိမ်းလေးကို မျက်စိထဲမှာ ပုံဖော်မြင်ယောင်ပြီး လူက ဟိုလိုဒီလိုဖြစ်ချင်လာပြီ)
"လာခဲ့ပါ .. ကိုထွန်းရဲ့  .. အရှုံးမရှိစေရပါဘူး .. ခစ် ခစ်"
ယွန်းက ကနွဲ့ကလျနဲ့ အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန် နားထဲမှာ နောက်ထပ် ရယ်သံတစ်ခုကို ကြားလိုက်မိသလိုပဲ။ စိတ်ထဲ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားသလို mystery လည်းဖြစ်သွားတယ်။ သဲကလည်း ကောင်းကောင်းကြီး အိပ်မောကျနေပြီဆိုတာ သိနေပြန်တော့ ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ Dark Desire တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ကို အထောက်အကူ ဖြစ်နေပြန်ရော။ အဲဒါနဲ့ ဘာမှတောင် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောမနေပါဘူး .. (အိုကေ)ဆိုပြီး တစ်ခွန်းထဲ တုံ့ပြန်လိုက်ပြီး လူက ထိုင်နေရာက ထရပ်ပြီးသားဖြစ်၊ ခြေလှမ်းတွေကိုတော့ အကျွမ်းတ၀င် ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ယွန်းရဲ့ အခန်းဘက်ကိုပဲ လှည့်လိုက်တယ်။
တစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန်၊ နှစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန်ဆိုတဲ့ စကားက တော်တော်မှန်မှန်း အခုတော့ ကျနော် လက်တွေ့သိနေပြီဗျာ။ ယွန်းရဲ့ အခန်းရှေ့ ကို လျှောက်လာတာများ ဖြူးလို့ .. မသိရင် ဒီအခန်းက ကျနော်ယူထားတဲ့ အခန်းလို့တောင် ထင်ရမယ် .. ဟီး။ အခန်းတံခါးရှေ့ ရောက်တာနဲ့တင် တံခါးကို လက်နဲ့ခေါက်လိုက်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်လို့ သုံးချက်ခေါက်တာတောင် ချက်ချင်း ပွင့်မလာဘူး။ အထဲကနေ (ကိုထွန်းလား)ဆိုတဲ့ ယွန်းရဲ့ မေးသံက အရင်ပေါ်လာတယ်။ ဘ၀ရှင် မင်းတရား အဆောင်တော်ကူးလာတဲ့ လေသံနဲ့ အေး မကျ၊ အိမ်း မကျ အသံနဲ့ ထူးလိုက်တော့ အထဲမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်လဲ မသိဘူး။ ထွန်းထားတဲ့ အခန်းမီးက အရင်ပိတ်သွားတယ်။ ပြီးမှ တံခါးက လူတစ်ယောက်စာ ၀င်သာအောင် ပွင့်သွားပါရော။
"ယွန်းးးးး ... ဘာဖြစ် !!!"
မှောင်မှောင်မှဲမှဲနဲ့ ဘာမှ မမြင်ရလို့ လူကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန် အတင်းပဲ လက်ကိုဆွဲကိုင်ပြီး အခန်းထဲ ထည့်လိုက်တော့ လူက နေ့လည်တုန်းကလို ဒယိုင်းဒယိုင်နဲ့ပဲ ရောက်သွားတယ်
"ကိုထွန်း .. မျက်စိမှိတ်ထား .. ယွန်းအကာတပ်ပေးထားမယ် .. အဲဒီ အကာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် မချွတ်ရဘူးးးး"
ဟိုက် .. ဘာတွေလဲဟ။ ဘာမှန်းသာ မသိတာ ၀ိုးတ၀ါး မြင်ရတဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ အခန်းထဲမှာ ယွန်းတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော် သိလိုက်တယ်။ နောက်ထပ် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရှိနေတာ။ အမှောင်ထဲမှာ ဖြစ်နေသည့်တိုင် မျက်လုံးသူငယ်အိမ် ၀ိုင်းစက်သွားတယ်။ တစ်နှင့်တစ်ပေါင်းရင် နှစ်ရတယ်ဆိုတာ ကလေးတောင် သိမှတော့ ကျနော် မသိစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလေ။ နှစ်နဲ့တစ်ပေါင်းရင်လည်း သုံးရမှာပဲ မဟုတ်လား ... ။ ဒီတော့ ယွန်းက ကျနော့်နားတိုးလာပြီး မျက်လုံးနေရာပေါ်ကို ညဘက်ဝတ်အိပ်ရင် သုံးတဲ့ မျက်လုံးဖုံးစွပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ လူက အေးဆေးပဲ နေပေးလိုက်တယ်။
ချောက်ခနဲ အသံကြားပြီး အခန်းမီးက ပြန်လင်းသွားတယ်။ မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကို ကာထားတဲ့ အဖုံးကြောင့် လင်းသွားတယ်ဆိုတာပဲ သိပြီး ဘာမှ မမြင်ရဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို မမြင်ရတာကိုက စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ တအားကောင်းနေတယ်။ အမြင်အာရုံကို ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာ တခြားသော အာရုံတွေ အလိုလို နိုးကြွားလာတယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ။ ကျနော့် နားထဲမှာ ယွန်းရဲ့ ခြေသံမဟုတ်တဲ့ နောက်ထပ် ခြေသံတစ်ခု ကိုယ့်ဘေးနားကို တိုးလာတာ ခပ်သဲ့သဲ့လေး ကြားလိုက်ရတယ်။
"ကိုထွန်းလာ .. ဖြေးဖြေးလေး လိုက်ခဲ့ .. ဘာမှလဲ မမေးနဲ့ .. ဘာမှလဲ မပြောနဲ့"
မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ရပ်နေတဲ့ ယွန်းဆီက ညို့ မြူတဲ့လေသံဟပ်နေတဲ့ ဒီစကားအဆုံးမှာ ကျနော့်လက်နှစ်ဖက်ကို တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက် လာကိုင်တာ ခံရတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လက်နဲ့ဆိုတာ နူးညံ့သည့်တိုင် မတူညီတဲ့ အတွေ့ကြောင့် ကျနော် သိလိုက်တယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ရဲ့ အထိအတွေ့ဆိုတာ ကျနော့်လိုမျိုး အရွယ်ကောင်း ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ကြွလာအောင် အလှုံ့ဆော်နိုင်ဆုံး ဓါတ်မဟုတ်လား။ အခုက တစ်ယောက်ထဲတောင် မဟုတ်၊ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာနေမှတော့ လူက ဘယ်နေနိုင်တော့မလဲ။ တကိုယ်လုံး Adrenaline တွေက လျှောက်ပြေးပြီး လူက သွေးတွေဆူပွက်လာပါရော။
ကျနော့်စိတ်ထင် ကုတင်နားမှာ သုံးယောက်သား အတူရပ်မိကြတယ်နဲ့တူတယ်။ အဲဒီမှာ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ရှိနေတဲ့ ယွန်းနဲ့ နောက်ကောင်မလေးက တိုင်ပင်ထားသလို နေရာယူလိုက်ကြတယ်။ ယွန်းက ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်လာပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းချိုချိုလေးနဲ့ ဖိနမ်းတယ်။ နောက်ကတစ်ယောက်ကတော့ ကျနော့်ခါးကို ဖက်လိုက်ပြီး ဂုတ်ပိုးသားကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိပြီး နမ်းရှုံ့ နေတယ်။ ဘာရတော့မလဲဗျာ ... စိတ်တွေထလာပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော် .. ရင်ခွင်ထဲရောက်နေတဲ့ ယွန်းရဲ့ ခါးကို လှမ်းဆွဲဖက်ပြီး ခါးအောက်က တင်အိုးကို လက်နဲ့ညှစ်ဖျစ်တော့တာပေါ့။ Bermuda ဘောင်းဘီထဲကနေ ဖောင်းဖောင်းကြီး ခုံးထနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကောင်နဲ့ ယွန်းရဲ့ အဖုတ်နေရာလေး မိမိရရကို ပွတ်ကျိတ်မိပါရော။
ဒီလိုမျိုး ကျနော့်ရဲ့ ညာဘက်လက်ကို ယွန်းဆီမှာ အသုံးပြုလိုက်သလို၊ ဘယ်ဘက်လက်ကိုလည်း နောက်ပြန်ထားပြီး ကျောပြင်ကို လာထိကပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ တင်ပါးတစ်ဖက်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ မှန်ရာကို ပြောရရင် အဲဒီအချိန်မှာ ယွန်းနဲ့အတူ ရှိနေတာ ဘယ်သူဆိုတာ ကျနော် သိတန်သလောက် သိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ယွန်းကိုယ်တိုင်က ဘာမှမမေးနဲ့ .. မပြောနဲ့လို့ ဆိုထားတာ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ကျနော်လည်း သူတို့ကြောင်းထားတဲ့ ဇာတ်အတိုင်း လိုက်ကယုံပဲလေ။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက် အရှုံးမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေပြီ။
ယွန်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးက အပေါ်အောက်တဆက်ထဲ ဖြစ်တဲ့ ဂါဝန်ပါးပါးလေးတွေ ၀တ်ထားတာဗျ။ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ဆုပ်ထားရတဲ့ အသိအရ နှစ်ယောက်စလုံး ဘာအတွင်းခံမှလည်း ၀တ်မထားဘူး။ ကော်တာပဲ ... ။ အခုလေးတင် တ၀တလင်ကြီး ချစ်ပွဲနွှဲထားတာ ဖြစ်သည့်တိုင် ကျနော့်မှာ ရမ္မက်စိတ်တွေ တအားကို ဖြစ်လာတယ်။
ကျနော့်ကိုယ်ကို ပွတ်သပ်နေတဲ့ လက်လေးဘက်မှာ ရှေ့ကလက်နှစ်ဖက်က ၀တ်ထားတဲ့ စပို့ရှပ်ကို တာဝန်ယူလိုက်ပြီး၊ နောက်ထပ်နှစ်ဖက်ကတော့ ဘောင်းဘီတိုကို တာဝန်ယူလိုက်ကြတယ်ဗျ။ အ၀တ်တွေ ကျွတ်သွားသည့်နောက် ကိုယ်ချင်းပူးကပ်နေတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ကျနော့်ထံကနေ ကွာသွားကြတယ်။ အဝေးကို ထွက်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ရှေ့ မှာ ထိုင်လိုက်မှန်း လိင်တံကို လာကိုင်တဲ့ မတူညီတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကြောင့် သိလိုက်ရတယ်။
“တူတူ လျက်ရအောင် .. စုပ်တာကတော့ တစ်ယောက်တစ်လှည့်ပေါ့”
အခုအချိန်ထိ ယွန်းကပဲ ဦးဆောင်ပြီး စကားပြောနေသေးတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ အသက်ရှူနှုန်း မြန်နေတဲ့ အသံကလွဲလို့ တခြားအသံ မထွက်သေးဘူး။
“ရှီးးးး .. ကောင်းတယ်”
ကိုယ့်လိင်တံကို မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လျှာလေးနဲ့ ထိတွေ့ရင်တောင် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဆြာတို့ သိကြမှာပါ။ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ လျှာလေးတစ်ခုချင်းစီက လိင်တံရဲ့ ဟိုဘက်ဒီဘက်ကို ထိတွေ့လျက်ပေးတာဆိုတော့ ပြောမပြအောင်ကို ကောင်းတာပဲဗျ။ ကျနော့်မှာ မျက်လုံးပေါ်တပ်ထားတဲ့ အကာကို တအားကို ဖြုတ်လိုက်ချင်တော့တာပဲ။ မဖြစ်တော့ဘူး။ တော်ကြာနေ .. စားရခါနီးမှ လက်ထဲက လွတ်ကျသလို ဖြစ်နေမယ်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိပေးရင်း လက်တွေ မျက်လုံးမရောက်အောင် တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ကြံလိုက်တယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး။ လိင်တံကို ပတ်ပြီးလျက်ပေးနေတဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ခေါင်းကို လက်တစ်ဖက်စီနဲ့ လှမ်းကိုင်လိုက်တာ။
“ယွန်းက လီးကိုလျက်မယ် .. ညီမက ဥတွေကို လျှာနဲ့ထိုးပေး”
“အားးးးး .. ကောင်းတယ် .. လုပ် လုပ် .. အဲဒီအတိုင်းလုပ်”
ယွန်းရဲ့ လျှာလေးက လီးတန်ထိပ်ဖူးကို တဆတ်ဆတ်နဲ့ ပတ်လျက်နေတဲ့အချိန်၊ နောက်ကောင်မလေးရဲ့ လျှာလေးက ဂွေးဥတွေရဲ့ အရည်ပြားကို လျှာနဲထိုးပြီးတော့ လျက်ပေးနေတယ်ဗျာ။ ကျနော်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး။ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ခေါင်းတွေကို လက်နဲ့တင်းတင်းကိုင်ထားမိယုံမက ကောင်းလွန်းလို့ တစ်ချက်တစ်ချက် ခြေဖျားတောင် ကြွသွားသေးတယ်။ အသက်ရှူသံတွေကလည်း တအားကို မြန်ပြီး ရှူးရှူးနဲ့ကို ဖြစ်လာရော
“ကိုထွန်း .. ထိန်းထားဦး .. တော်ပြီ .. တော်ပြီ .. ညီမ ရပ်လိုက်တော့”
ကျနော့်ပုံစံကို ကြည့်ပြီး ယွန်းက အထာပေါက်တယ်ထင်တယ်။ လီးကို လျက်လိုက်ပြီး ထိုင်နေရာက ထလိုက်သလို၊ သူ့အဖော်ကိုလည်း လှမ်းတားလိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ လာ ကိုထွန်း မို့ရာပေါ် သွားရအောင်ဆိုပြီး ဆွဲခေါ်လို့ ကျနော်လည်း လိုက်သွားတယ်။ မို့ရာပေါ်ရောက်တော့ ယွန်းခိုင်းတဲ့အတိုင်း ပက်လက်နေပေးလိုက်တယ်။ ကျနော် နေရာကြပြီဆိုတာနဲ့တင် သူတို့နှစ်ယောက် အ၀တ်တွေချွတ်ပြီး ကိုယ်စီကိုယ်စီနေရာယူကြတယ်။ ယွန်းက ခြေရင်းဘက်၊ ကောင်မလေးက အပေါ်ဘက်။
ဒါ .. ကျနော့်အကြိုက်ပေါ့။ အနည်းဆုံးတော့ စိတ်အာရုံကို လွှဲလို့ရသွားတယ်လေ။ ယွန်း ကျနော့်ခါးကို ခွပြီး ကောင်းဘွိုင်မလေးအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး လီးကို အဖုတ်ထဲသွင်းပြီး တက်ဆောင့်နေပေမယ့် ကျနော့်အာရုံက ဒီနေရာတစ်ခုထဲ ပြုထားစရာ မလိုတော့ဘူး။ ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်ရောက်ပြီး ပါးစပ်နဲ့တည့်တည့် လာဖြစ်နေတဲ့ အဖုတ်အသစ်လေးကို အားရပါရး လျက်ပေးတဲ့ဆီမှာ စိတ်ထည့်ထားလို့ ရနေတယ်လေ။ အနံ့လေးက မဆိုးပါဘူး။ လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ ခပ်သင်းသင်းလေးပါ။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကတော့ အလုံးကြီးတယ်။ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်ဖက်နဲ့ ကောင်းကောင်းကြီး ဆွဲစုပ်နိုင်တယ်ဗျ။ ကျနော်လည်း မမြင်မစမ်းနဲ့ လုပ်နေရတော့ လျှာနဲ့ထိတွေ့တာကနေ ဘာသာပြန်ပြီး မှတ်နေရတယ်။ အတွေ့အကြုံအသစ်ပေါ့ဗျာ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုကောင်းတာက ကျနော် ထိန်းထားနိုင်ပြီး ယွန်းဘယ်လောက် ၀ုန်းဒိုင်းကျဲအောင် ဆောင့်နေပါစေ၊ ပြီးမသွားတာကိုပဲ။ ယွန်း အရင်ပြီးတယ်၊ မရှေးမနှောင်းမှာ ကျနော့်အဖုတ်လျက်ပေးနေတဲ့ ကောင်မလေး ပြီးတယ်။ ကျနော့်ကောင်ကတော့ ယွန်းအဖုတ်ထဲမှာ မာတောင်မှုအပြည့်နဲ့ ရှိနေဆဲ ….။
"အဲတော့ .. မြင် မြင်သွားပြီ"
"အာ .. မဟုတ်ဘူး .. ပေါင်တန်တွေနဲ့ ပွတ်ပြီး သူ့ဟာသူ ကျွတ်သွားတာ"
မျက်နှာလေးနီမြန်းပြီး ရှက်ဝဲ၀ဲ အသွင်လေးနဲ့ လှမ်းကြည့်နေတဲ့ ၀ါဆိုဦးကို ကျနော် ကမန်းကတမ်း ရှင်းပြရတယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ။ အစောပိုင်းတုန်းကတော့ ၀ါဆိုဦး ကျနော့်မျက်နှာကို ခွထားတဲ့အချိန်၊ ကျနော်က သူ့အဖုတ်ကို မှန်းပြီးလျက်ပေးနေတာ။ စစချင်း တော်တော်လေး အဆင်ပြေနေပေမယ့် ပြီးခါနီး အချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒင်းလေးက အဖုတ်နဲ့ မျက်နှာကို ပွတ်သလို ဖြစ်တာကိုး။ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို စုပြီးတော့ ကိုယ့်ခေါင်းကို ညှပ်ထားသလိုလည်းဖြစ်၊ ရှေ့နောက်ကလည်း လှုပ်ပြီးရွေ့ ဆိုတော့ မျက်နှာပေါ် တပ်ထားတဲ့ အ၀တ်ဖတ်က နေရာလွဲပြီး ကျွတ်သွားတာ။
ယွန်းက တစ်ချီပြီးသွားလို့ ကျနော့်ဆီးစပ်ပေါ်က ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်၊ သူက နေရာလဲမယ်ဆိုပြီး ကျနော့်မျက်နှာပေါ်က အကြွ .. ကျနော့်မျက်လုံးတွေမှာ အဆီးအတား မရှိတော့ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ကြတာ။ တကယ်ပဲဗျာ .. ကောင်မလေးတွေ ခက်တော့တာပဲ။ တကယ်ဆို သူဘယ်သူ ကျနော်ဘယ်သူဆိုတာ မသိစရာမှ မရှိတာ။ ဒါကိုပဲ အခုကျတော့ ရှက်သွေးလေးတွေ ဖြန်းနေတယ်။ အမယ် .. လက်နှစ်ဖက်နဲ့တောင် တစ်ဖက်က နို့နှစ်လုံးကို ကန့်လန့်ဖြတ်ကာ၊ ကျန်တဲ့တစ်ဖက် အဖုတ်ဝလေးကို လှမ်းအုပ်ထားသေးတယ်.. ခွီး။
အဲဒီအဖုတ် ကျနော် လျက်ပေးထားတာကိုကျတော့ မေ့နေတယ် .. ။
"ကဲပါ .. ညီမရယ် .. ရှက်မနေပါနဲ့တော့ .. ကိုထွန်းက အချိန်တန်ရင် ပြန်သွားမှာ .. အချိန်ရှိတုန်းလေး လုပ်ကြရအောင် .. ညီမ စိတ်မ၀င်စားရင် အစ်မ လုပ်လိုက်မှာနော် .."
"အာ .. အစ်မကလဲ .. အဲ့လိုတော့ ဖြစ်မလား .. ၀ါဆိုမှ အလိုးမခံရသေးတာ"
"ခိ .. ခိ"
"ခစ် ... ခစ်"
အဲဒီနောက်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ ဖြစ်သွားတယ်ပဲ အတိုချုံးပြောလိုက်ပါရစေတော့။
ယွန်းနဲ့ ၀ါဆိုက ကုတင်စောင်းမှာ လေးဘက်ထောက်ပြီး အတူတူ ကုန်းထားပေးကြတယ်လေ။ ကိုယ့်ဆြာတို့ သိကျမှာပါ။ ကုတင်စွန်းကို ဖင်သားတွေ ကျော်ထွက်နေတဲ့ အနေအထား။ ဒါမျိုးပုံစံက ယောက်ျားလေးတွေ အဖို့ လုပ်ရတာ မျက်စိအရသာရှိ၊ လီးအရသာရှိသလို လုပ်လို့ကလည်း တအားကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တွေက ကြမ်းပြင်မှာ ဆင်းမတ်တပ်ရပ်၊ ခြေထောက်အားကိုယူပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင့်နိုင်တယ်။ မို့ရာပေါ်မှာဆို ဘယ်လောက် ဆောင့်နိုင်တယ်ပြော၊ ဒူးခေါင်းက ကြာရင် မလိုက်နိုင်ဘူး။ အခုဟာကျတော့ ခြေတန်တစ်ခုလုံးရဲ့ အားကို အသုံးချနိုင်တာလေ။
ဘာပြောကောင်းမလဲ ယွန်း လှမ်းပေးလိုက်တဲ့ ကွန်ဒွန်းကို စွပ်ပြီး ကျနော် လုံးကျစ်တင်းပြောင်နေတဲ့ ၀ါဆိုရဲ့ တင်အိုးလေး နှစ်ဖက်နောက်မှာနေရာယူ၊ ကုန်းထားလိုက်လို့ နောက်ဘက်ကို ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ဝကို လီးရဲ့ ထိပ်နဲ့ ဖိထောက်ပြီး၊ ဆတ်ခနဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ အိအိနွေးနွေး အရသာလေးနဲ့အတူ ချွဲပျစ်ပျစ်အရည်တွေရဲ့ အကူကြောင့် လျှောလျှောလျှူလျှူပါပဲ (၀ါဆိုက အသားညိုတော့ အရည်မကျဲဘူးဗျ .. စီးတယ်)။ လီးအကုန် ၀င်သွားပြီဆိုတာနဲ့တင် ကျနော်လည်း ၀ါဆိုရဲ့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ဖမ်းညှပ်ကိုင်ပြီး အားကုန်ဆောင့်နေတော့တာပဲ။
ယွန်းရော .. ၀ါဆိုရော တစ်ချီစီပြီးထားတာ သိနေတော့ ကျနော် ညှာမနေတော့ဘူး။ ယွန်းပြောတာလည်း မှန်တယ်လေ။ ကျနော်က လစ်ပြီး ထွက်လာရတာ မဟုတ်လား။ အချိန်မရှိဘူး။ ဒီတော့ ပွဲကြမ်းပစ်လိုက်တယ်။ တစ်ခုကောင်းတာက ကျနော်က ပထမတစ်ချီပြီးထားလို့ နောက်တစ်ချီ ထပ်ဆွဲရရင် တော်တော်ကြာကြာ ဆွဲနိုင်တယ်။ တော်ယုံတန်ယုံနဲ့ မပြီးဘူးပေါ့။ ဒီတော့ အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် ၀ါဆို တစ်ချီပြီးတယ်။ ယွန်းဘက်ကို ပြောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ယွန်းကိုပဲ ဖိလိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ ကုန်းပေးထားတာကို အားနာလို့။ လေးငါးချက်လောက် ဆောင့်ပေးပြီး ၀ါဆို့ဘက် ပြန်ပြောင်းတယ်။
အဲ့လို အပြောင်းအလဲ လုပ်လိုက်တာ သုံးခါလောက် ပြောင်းပြီးတဲ့အချိန် ဘယ်လိုမှ မရတော့ဘူး။ ကွန်ဒွန်းလဲ စွပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အပြင်၊ စိတ်ကလည်း တအာကို ထကြွနေတာကြောင့် ပြီးခါနီးတဲ့အချိန်မှာ လီးကို လိုးနေတဲ့ ယွန်းရဲ့ အဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကွန်ဒွန်းကို ဖတ်ခနဲနေအောင် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး မာတောင်နေတဲ့ လိင်ချောင်းကို လက်နဲ့ အားရပါးရ ကွင်းတိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘာပြောကောင်းမလဲ သုတ်ရည်တွေဆိုတာ ဖြူဖွေးစွင့်ကားနေတဲ့ ယွန်းရဲ့ တင်အိုးနှစ်လုံးကြားကို ဖတ်ခနဲ ဖတ်ခနဲ စင်ပြီး ထွက်ကျတော့တာပဲ .....
ချောင်းသာကနေ အပြန်ခရီးဟာ တိတ်ဆိတ်မှုအပေါင်းနဲ့ ပျင်းရိခြောက်သွေ့စရာ ကောင်းနေတယ်ဗျာ။ အကွေ့အကောက်တွေ များလွန်းတဲ့ လမ်းခရီးကြောင့် သဲဟာ ကျနော့် ပုခုံးပေါ်မှာ မှေးထားရင်း မျက်လုံးကို မှိတ်ထားတယ်။ ကျနော်ကတော့ ....
ယွန်းက ကျနော်နဲ့ မျက်စောင်းထိုးလို အကွာအဝေးမှာ လူသွားလမ်းလေးရဲ့ ဟိုဘက်ခြမ်းမှာ ထိုင်နေတယ်။ ကျနော်နဲ့ သူ့ကို ရင်းနှီးသွားစေဖို့ ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ နားကြပ်လေးဟာ သူမရဲ့ နားမှာ လှလှပပနဲ့ ရှိကာနေလေရဲ့ ။ တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်လို့ပဲလား မသိ။ ကျနော် ရှိရာဘက်ကို လှည့်လှည့်ကြည့်တဲ့ ယွန်းကို ကျနော် ပြုံးပြရမလား၊ မဲ့ပြရမလားဆိုတာ ကျနော် သေချာမသိဘူး။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ကျနော့်မျက်နှာမှာ ခံစားချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနေမယ်ဆိုတာပါပဲ ... ဟူးးးးးးး
တစ်မျိုးပဲဗျာ .. ခင်ဗျားတို့ နားလည်အောင် ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်း မသိတော့ပါဘူး ..
စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ကျနော် ကားတီဗီစကရင်မှာ ပြနေတဲ့ မြန်မာအမ်တီဗီ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပဲ လှမ်းကြည့်နေလိုက်တော့တယ် ....။
No matter how much we love .. there's always time to say goodbye
ပေးခဲ့ပြီးတဲ့ ငါ့ရဲ့ အချစ်တွေ မင်းအတွက် ငါ့ရဲ့အချစ်တွေ .. အားလုံးယူကာ အဝေးနင်ထွက်သွားတော့ .. စားလို့မရတဲ့နေ့တွေ .. အိပ်လို့မရတဲ့ ညတွေ ငါ့ပြက္ခဒိန်မှာ များလာရုံပဲပေါ့။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 11:45